Nhorondo pfupi yeBhuku raZvakazarurwa. Chitsauko 1-13
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nhorondo pfupi yeBhuku raZvakazarurwa. Chitsauko 1-13
Nhorondo pfupi yeBhuku raZvakazarurwa. Chitsauko 1-13
Nhanganyaya yenhorondo yekereke yemakore 2000 enguva dzemakereke.
Kristu ndiye Arfa neOmega, Wokutanga nowekugumisira, Wokuvamba nowekuPedzisira. Chinangwa chakatarisiswa neChitsauko chino chiri paMunhu wepakati pezvinhu zvose, Jesu Kristu. Chigadziko chemwenje minomwe chinoshuma chakavanzika chemakereke manomwe naJesu achifamba pakati pemwenje. Kereke yega-yega inoshuma hunhu hwenguva imwechete munhorondo yekereke. Makereke manomwe epanzvimbo anoratidzira zviitiko zvenguva yekereke imwe-neimwe apo mamiriro ezvinhu anoshanduka kubva pamatangiro akaita nguva yekereke imwe neimwe, uye kuti shanduko idzi dzinobata sei kereke iyoyo.
Kereke yekutanga yakanaka paEfeso inomiririra kereke yekutanga yakatangwa nevapostora sekereke yeTestamente Itsva inotevera Magwaro. Maguta paaibviswa paEfeso, kereke yaizoparara ichipinda muNguva yeRima payaibva paMagwaro. Pakaipira zvinhu paive panguva yekereke yechitatu inomiririrwa nePergamosi raive guta guru rezvematongerwo enyika reAsia Monor. PaKanzuru yeNicaea muna 325 AD mubati weRoma Constantine akabva atora simba rezvematongerwo enyika rekutonga pamusoro pekereke, achiimanikidza kutenda mazwi asiri muMagwaro nekutevera zvitendero zvechipegani kana kuti vasingatendi. Asi, tichienderera mberi, tinoona kuti maguta, tichitanga neguta rechishanu, akatanga kufamba achidzokera kuhwaro hweEfeso saka kereke inozodzokera kuMagwaro munguva yeMutsiridzo. Kereke yekupedzisira yeRaodikia iri pahwaro neEfeso saka inofanira kufanana nenguva yekereke yekutanga. Kereke yekutanga neyekupedzisira ndidzo dzega dzine chokwadi chakazara. Jesu, Shoko ndiye Chokwadi. Nyenyedzi nomwe dzinomiririra vatumwa muruvoko rwerudyi rwesimba raJesu Kristu, anotungamiririra kereke munguva imwe neimwe.
ZVAKAZARURWA 1:17 Ndakati ndichimuvona, ndikawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa;
Johane akawira pamberi paJesu nengowani yake yeshinda yemutongi. Anotonga neShoko, Bhaibheri.
JOHANE 12:48 Unondiramba asingagamuchiri mashoko angu, unomumwe, unomutonga; shoko randakareva ndiro richamutonga nezuva rekupedzisira.
Meso ake akaita semirazvo yemoto nekutsamwa kukuru kune avo vanobva paShoko rake. Nebhanhire rekutonga rakasungwa pachipfuva chake.
Tsoka dzake dzakafamba mumoto wegehena nekuda kwedu kuti anorasira zvivi zvedu pana Satani. Isu takazvipira here kufamba muhupukisi nekumhurwa nekuda kwake? Kana kuti tinongotenderana nekereke yedu kuti tiite mbiri.
Anopfeka ngowani yeshinda yeMutongi mukuru.
ZVAKAZARURWA 1:14 Musoro wake nebvudzi rake zvakanga zviri zvichena samakushe machena, sechando; meso ake akaita somurazvo womoto.
15 Tsoka dzake dzakanga dzakafanana nesafuri inopenya, inenge yakanatswa muvira; izwi rake rakanga rakaita senzwi remvura zhinji.
Chitsauko ichi chinoburisa pachena nguva dzemakereke apo maKristu anofamba achibva pakuita kwaiitwa nekereke yekutanga ikawira muNguva dzeRima.
Efeso ndiyo yaive kereke yekutanga yakasimba yakaisa muenzaniso kunguva dzese dzemakereke. Mwenje wakatungidzwa neMweya Mutsvene wakaburuka pamusoro pevapostora muimba yepamusoro pazuva rePentecosti. Mapostora pachawo akabva atanga kereke yekutanga vakanyora mabhuku mazhinji eTestamente Itsva. Hakuna Anogona kushandura zvinhu akazviita kuti zvidarike danho raive riri nekereke yekutanga.
Nekufamba kwenguva vakavarairwa vakarasikirwa nerudo rwavo rwekutanga kuShoko raMwari Bhaibheri. Hutungamiri hwevanhu hwakapindira hukatora kereke.
ZVAKAZARURWA 2:6 Asi chinhu ichi unacho, kuti unovenga mabasa avaNikoraiti, andinovenga neni vo.
Nico (niko kubva pazwi rekuti vanikoraiti) zvinoreva kuti kutapa kana kupamba. Kusimudzira munhu mutsvene pamusoro peungano. Mwari akavenga izvi.
Kana mukaronga zvakare mavara ekuti LAITY anobva pazwi rekuti vaNikoraiti rechirungu munowana izwi rekuti ITALY. Uyu ndiwo musha wekereke inotapa nekudzvanyirira vanhu, yeRoman Catholic. Inozviwisira pasi pehutungamiri hwayo hwemunhu, Pope.
Kereke yeCatholic yepanzvimbo yega-yega inozviwisira zvakazara kumuprista wayo anova musoro wekereke.
Vapostora havana kubvira vasiya munhu mumwechete achitungamira kereke.
Izwi rekuti “pasita” watinoti mufundisi anodaidzwazve neBhaibheri achinzi mufudzi rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva zvinoita kuti ashaiwe simba rinobva muMagwaro kuti atonge kereke. Mufudzi anorehwa nezwi rekuti shepadhi kuchirungu haana kubvira adaidzwa kuti pasita kana kuti mufundisi muBhaibheri.
MaKristu ese maprista, zvinoita kuti maKristu ese ave vakaenzana pamasimba avanawo mukereke.
I PETRO 2:9 Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, bwuprista bwamambo, rudzi rwutsvene, vanhu vaakazviwanira.
Saka hakuna muKristu mumwechete ari pamusoro peumwe muKristu.
Mufudzi (shepadhi) anofudza boka nekurichengetedza.
Basa iri mukereke harina kupihwa kumunhu mumwechete asi rakapihwa chikwata chevakuru vatinoti maeredha.
Pauro pedyo nekwakatangira Testamente Itsva akateya nheyo dzekereke yeEfeso iyo, sekereke yenguva yeEfeso, yaizova muenzaniso uye nheyo yemakereke ese aizotevera.
MABASA 20:16 Nokuti Pauro wakanga achiti: Ndichapfuvura Efeso nechikepe, kuti arege kunonoka paAsia; nokuti wakanga achikurumidza kuti kana zvichibvira ave Jerusarema nezuva rePentekosta.
17 Zvino iye ari paMireto, akatumira Efeso kundodana vakuru vekereke.
MABASA 20:28 Zvichenjererei imi, neboka rose ramakaitwa vatariri varo noMweya Mutsene, kuti mufudze kereke yaMwari, yaakatenga neropa rake.
Petro pedyo nekwekupedzisira kweTestamente Itsva, anotaura chinhu chimwechete.
I PETRO 5:1 Naizvozvo ndinoraira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwe chete navo nechapupu chamadambudziko aKristu, nomugovani navo wokubwinya kuchazoratidzwa, ndichiti:
2 Fudzai boka raMwari riri pakati penyu, musingazviiti nokurovererwa, asi nomoyo unoda nokuda kwaMwari, musingazviiti nokuda kwokukarira fuma yakaipa;
3 musingaiti nesimba nezvamakagoverwa asi muve vatungamiriri veboka.
Vashumiri varanda uye havafaniri kuedza kuzvisimudzira kuti vave pamusoro peboka.
Vakuru mukereke panzvimbo vanofanira kutarira nekufudza kereke. Vanozviita sechikwata. Kwaive kusina hutungamiri hwemunhu mumwechete. Hapana kubvira pakataurwa pamusoro pemufundisi (pemufudzi sekunyorwa kwazvakaita muMagwaro) anodaidzwa kuti pasita muBhaibheri rechirungu.
Saka basa remufudzi, rekufudza boka, rakapiwa kuchikwata chevakuru panzvimbo.
Mukuru mumwe nemumwe akaenzana neumwe pachinzvimbo. Hakuna munhu muhushumiri hwemabasa mashanu ari pamusoro pevakuru vekereke panzvimbo. Vari muhushumiri hwemabasa mashanu vakuruwo. Petro akanyorera kuvakuru semukuru pamwechete navo. Haana kuedza kuzvisimudzira semupostora kuti ati ari pamusoro pevakuru.
Vaprofita vakanyora Testamente yekare. Mapostora akanyora Testamente Itsva.
Saka kana vakuru vakagara paBhaibheri Shoko rakanyorwa vanenge vachitotaura zvakataurwa nevaprofita nevapostora. Zvino hushumiri huviri uhu hunenge hwavemo mukereke.
Havasi vose vakuru vanoparidza kana kudzidzisa.
I TIMOTIO 5:17 Vakuru vanobata kereke zvakanaka ngavanzi vanofanirwa nokukudzwa kaviri, zvikuru avo vanobata pashoko napakudzidzisa.
Vamwe vakuru vanoparidza vamwe havaparidzi. Asi vese vane simba rakafanana. Ruzivo rwekubata nekugadzirisa pamatambudziko nehukama pakati pevanhu hazvina kumirira vaparidzi nevadzidzisi. Kukurudzira, kugadzirisa, nekubatsira vanhu ibasa rinogona kuitwa nechero mukuru mukereke.
Vaparidzi vashumiri saka zvinoreva kuti naivo varanda.
Kana varanda vakaita basa, havatsvagi kukudzwa nekuda kwaro. Havatsvakiwo kutonga. Havana rudo rwekukosheswa pakati pevamwe. Vanoita basa ravo sevanhu vasina kuda kuonekwa nepavanogona napo vachienda mberi.
Hakuna mushumiri ari muranda waMwari anoita basa rake chero akaedza zvakadii pedyo nekururama.
RUKA 17:9 Ko ungatenda muranda, zvaaita zvakanga zvarairwa here?
10 Saizvozvo nemi vo, kana maita zvose zvamarairwa, muti: Tiri varanda pasina, takaita sezvataifanira kuita.
Mwari haana chaanowana kubva kumuranda wake. Zvinoreva kuti Mwari anokwanisa kuita basa rake pasina kushandisa munhu. Vashumiri havasitori dambudziko kuna Mwari asi vangori nzira yake.
Jesu naJohane Mubapatidzi havana kubvira vabhabhadzira vatungamiri vezvitendiro kumaJuda .
Vaive vatungamiri vechitendero vechiJuda vakakurudzira maJuda kuti vauraye Jesu kunze kweguta reJerusarema.
Saka ndiyani anobatwa nemhosva yekuti Jesu ari kunze kwemukova wekereke yeRaodikia? Ndiyaniko musoro wekereke ari mukereke? Mufundisi, pasita.
Muviri haugoni kuita misoro miviri. Saka musoro wechokwadi, Jesu, anofanira kumira kunze kwekereke.
VAEFESO 5:23 Nokuti murume musoro womukadzi, saKristuvo musoro wekereke;
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikia, uti: Zvanzi
ZVAKAZARURWA 3:20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza;
Mupostora Johane, mumwadhi yake yekupedzisira, anotiyambira pamusoro pemutungamiri wekereke anoshandisa simba rake pamusoro pekereke yake kuramba Johane aitevera Magwaro uye kudzinga vanhu mukereke vasingatenderane nemutungamiri. Nhasi uno simba iri rinoshandiswa napasita anoti, “Ino ikereke yangu. Itai zvandinoreva kana budai”.
III JOHANE 1:9 Ndakanyorera kereke, asi Deotrefe unoda kuva mukuru pakati pavo, unotiramba isu.
10 Naizvozvo kana ndichivuya, ndichayevudza mabasa ake aanoita, kuti unotiitira makuhwa namashoko akaipa; haatendi naizvozvo bedzi, iye amene haagamuchiri hama, vuye vakanga vachida havo unovadzivisa nokuvadzinga mukereke.
Rudo rwekuva mukuru. Vafundisi kana mapasita vanoda kwazvo kusimudzirwa pamusoro peungano.
Chivi chekutanga kuDenga chaive kuzvikudza. “Ndiri pamusoro pako. Ndiri nani kupinda iwe.”
Rusarura rwemarudzi rwaive rusiri chinhu chakatangira muTestamente Itsva.
Mubati wevaRoma Claudius akarambidza maJuda kusvika kuRoma kusanganisira maKristu aaifungidzira kuti maJuda. Saka maJuda nemaKristu vakabva vapararira kwese kwese.
Petro aitaura nevatorwa vese vaitenda munaJesu Kristu.
I PETRO 1:1 Petro, muapostora waJesu Kristu, kunavakasanangurwa vari vaeni, vakapararira paPonto, neGaratia, neKapadhokia, neAsia, neBitinia,
Vakapararira nyika dzakasiyana siyana nekuda kwekutambudzwa. MaKrustu vaive mapoka maduku-maduku.
Zvino, munoziva here, vanhu vekutanga vaya pavakabuda, dzimwe nguva vaingova vatanhatu kana vasere vavo, pamwechete? Vakazunungusa nyika.Zvakanaka munoziva, apo Akwira naPrisira, vhuserere iya huru yakaitwa naAporo ikoko, paingova nevanhu vatanhatu kana vasere varume nevakadzi muboka iroro. Kereke iyoyo yese, yaive nevanhu vatanhatu kana vasere. Munowana vanhu vashanu kana vatanhatu, vanhu vari muno vakawanda zvakapetwa kanomwe pane vaivepo nguva iyoyo.
Munoziva, Jesu aingova nevadzidzi gumi nevaviri chete. Isu tinogarofunga pamusoro pekukura kudarika ipapo. Asi Mwari haaiti nezvevazhinji. Mumapoka maduku aya ndimo maanozviwanira. Mazviona? Tarisai kubva munguva dzese dzemakereke, chero nguva yaaisangana nevanhu. Maive muboka duku mazviona, otaura navo, ovagadza. Kuda kwaMwari kukuru kuita izvozvo. Ndiyo nzira yaanoda kuzviita nayo. Zvino tongoda kuti Mwari agare pakati pedu, tichienda, tichiita zvinhu izvi.
53-0216 MUTUMWA WANGU ACHAENDA MBERI KWENYU
Munoziva, dzimwe ungano dzedu dzinobata mweya zvakanyanya ndeapo vaviri kana vatatu vanenge varipo, iye anenge aripowo. Ndine chokwadi chekuti maKristu mazhinji anokwanisa kutaura pamusoro pezvakamboitika imwe nguva takaungana tiri kaboka kaduku, musangano wekunamata muduku wemumba werudzi rwakadaro. Ndipo ini dzimwe nguva dzandakaropafadzwa kwazvo, apo Mweya Mutsvene unouya pakati pedu achitikomborera patinenge tiine misangano miduku. Akaita vimbiso iyi yekuti makereke maduku, “vaviri kana vatatu vachisangana Muzita rangu ndichava pakati pavo”.
I PETRO 2:9 Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vuPirisita bwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muvuye kuchiedza chake chinoshamisa.
MaKristu ese vaprista. Kwaive kusina munhu aive pamusoro pemuprista kunze kwemuprista mukuru iye Jesu. Saka tese takaenzana. Hakuna munhu akasimudzirwa pamusoro penyu.
MaKristu ese irudzi rumwe mumaziso aMwari nekuti maKristu akazvarwa patsva muMweya waKristu. Saka tese tina Baba mumwechete saka hatigoni kuva vemarudzi akasiyana,
KumuKristu akazvarwa patsva kune rudzi rumwechete chete, rudzi rwevanhu.
I PETRO 2:10 Imi kare makanga musi vanhu, asi zvino muri vanhu vaMwari; makanga musinganzwirwi ngoni, asi zvino manzwirwa ngoni.
Tese tinobva kwakasiyana zvataidaidza kuti ndudzi dzakasiyana. Asi vanhu vakazvarwa patsva vose ndevaMwari. Ndiye Baba vedu isu tiri hanzvadzi nehanzvadzi.
VAEFESO 3:14 ... kunaBaba.
15 Avo, rudzi rwose kudenga napanyika runotumidzwa nezita ravo.
Kune rudzi rumwechete kuDenga.
MaKrustu haabvi kundudzi dzakasiyana, vose vanobva kurudzi rumwechete.
Vanhu vemhuri imwe havabvi kundudzi dzakasiyana.
Rwiyo rwaSoromoni rwiyo rwerudo pakati paSoromoni nemukadzi mutema.
RWIYO RWASOROMONI 1:5 Ndakasviba, asi ndakanaka hangu,
NUMERI 12:1 Zvino Miriami naAroni vakapopotera Mosesi nokuda kwomukadzi aiva muKushi, waakanga awana; nokuti akanga awana mukadzi aiva muKushi.
Vanhu vekuEthiopia vatema ndivo vanodaidzwa kuti vakushi muBhaibheri.
NUMERI 12:9 Ipapo kutsamwa kwaJehovha kwakavamukira, iye akabva.
10 Gore rikabva pamusoro petende rokusangana, onei Miriami ava namaperembudzi, akachena sechando; Aroni akatarira Miriami, onei ava namaperembudzi.
Mwari haana kuranga Mosesi kuti aive aroora mukadzi mutema. Akaranga Miriami nekupikisa kwaakaita wanano yavo.
VAROMA 10:12 Nokuti muJudha nomuGiriki havasiyani;
VAGARATIA 3:28 Hakuchina muJudha kana muGiriki,
Pakuonekwa kwedu pane musiyano pakati pendudzi dzevanhu asi vanhu vakazvarwa patsva vanonzwanana muzvirevo zvemweya sevatadzi vakaregererwa vakadanwa nekuda kwenyasha dzaMwari.
VAGARATIA 3:29 Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbrahama, vadyi venhaka sezvamakapikirwa.
Hatiponeswe nechero chinhu chatinoita panyama. Ruponeso rwedu runobva pakutenda vimbiso yaMwari. Munezvenyama tinobva kundudzi dzakasiyana. Asi tikazvarwa patsva kuMweya tinova vadyi venhaka kuvimbiso dzese dzakaitwa naMwari.
Hakuna musiyano unoiswa neruvara muMweya waMwari. Saka Mwari haatarisi musiyano paruvara. Munhu mutema. Simoni wekuSairini kumusoro kweAfrica, akabatsira Jesu kutakura muchinjikwa wake. Iyi ndiyo yega nguva yaidiwa rubatsiro naJesu. Kana uchida rubatsiro zvakanyanya, hauna basa nekuti munhu akubatsira murudzii paganda rake.
Vanhu vakazvarwa patsva vese vakagamuchira chikamu cheMweya Mutsvene waMwari. Mweya waMwari wakapatsanurwa muzvikamu zana nemakumi maviri pazuva rePentecosti. Vanhu zana nemakumi maviri vose vaive neMweya mumwechete, saka munzvimbo dzemweya, vose vaive neruvara rumwe. Zvisinei nekuti ruvara rweMweya rwakadii, vose vaive neruvara rumwe reMweya.
Izvi hazvibati pakuti munhu mukadzi here kana murume nekuti Mwari ane zvese hunhu hwechirume nehwechikadzi maari. Varume nevakadzi vese vakaponeswa zvakaenzana uye vadyi venhaka yevimbiso yaMwari vakaenzana. Asi chikamu cheMweya Mutsvene chinowanikwa mumurume chine hunhu hwemurume nemumukadzi hunhu hwechikadzi zvakaenzana.
Saka nguva yekereke yekutanga inokwanisa kumiririrwa nechigadziko chemwenje minomwe chine mwenje wepakati wakatungidzwa, iwo wakatanga kutungidzwa neMweya Mutsvene pazuva rePentekosta.
Simyrna yaive nguva yekereke yechipiri yakasangana nekurwadziswa kukuru nevabati vehushe hweRoma vakaparadzira maKristu kuti vaparidze Evangeri nekudzikisira kuvodzwa kwekereke nekuti vaibva mumaguta kwaive nevadzidzisi vaive nehuwori.
Hunhu hutsva hwakabva hwatanga. Munhu akabva asimudzirwa akadaidzwa kuti Bhishopu weguta. Izvi zvaive zvisingabvi muMagwaro. Guta reFiripi raive nemabhishopu mazhinji.
VAFIRIPI 1:1 Pauro naTimotio, varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vose munaKristu Jesu, vari paFiripi, navatariri navaranda vekereke:
1965 KUBURITSWA PACHENA KWENGUVA NOMWE DZEMAKEREKE CHITSAUKO 5 PERGAMOSI
Zvino dzidziso iyi yakatanga sechiito munguva yekereke yekutanga. Zvinoita sekuti dambudziko riri mumazwi maviri “vakuru (presibheterio) uye ‘vatariri’ (mabhishopu). Zvisinei nekuti Magwaro anoratidza kuti mune vakuru vakawanda mukereke imwechete, vamwe vakatanga (Ignatius pakati pavo) kudzidzisa kuti pfungwa yekuita bhishopu yaive yekuitwa mukuru kana kuva nesimba pamusoro pevakuru.
Zvino chokwadi chenyaya iyi izwi rekuti “eredha” mukuru rinoratidza kuti munhu wacho ndiyani, apo izwi rekuti ‘bhishopu’ rinomiririra basa remunhu iyeye. Mukuru ndiye munhu. Bhishopu ndiro basa remunhu iyeye. “Eredha’ (mukuru) rakagara uye richagara richireva zera remunhu munaShe. Mukuru, kwete nekuti akasarudzwa kana kuti akagadzwa nezvimwe zvakadaro, asi nekuti AKURA. Akura, uye adzidza kwete rusvava paruzivo, anovimbika nekuda kweruzivo uye humbowo hwenguva refu yaanayo ari muKristu.
Chiedza chemwenje wekereke yekutanga chaive chatanga kudzima. Pfungwa dzevanhu dzaive dzatanga kutsiva dzidziso yeBhaibheri.
1965 KUBURITSWA PACHENA KWENGUVA NOMWE DZEMAKEREKE CHITSAUKO 8
Vaive vazhinji vakarongwa naSatani, nekuti maive munguva iyoyo matakaona kutanga kwevanhu vari muhushumiri vachitora hutungamiri husina kupihwa mvumo neBhaibheri pamusoro pehama dzavaishumira nadzo. (Mabhishopu akagadzwa mumatunhu, kuti vave pamusoro pevakuru mukereke).
57-0908M VAHEBERU CHITSAUKO CHECHISHANU. NECHECHITANHATU. 1
Asi ndinovimba muhukuru hwesimba rekereke yepanzvimbo. Hongu. Regai kereke imwe neimwe izvimiririre, isarudze vafudzi vayo, varanda vayo, va, chero zvavanoda. Zvino nenzira iyoyo, vanhu vanenge varimo havazoiti bhishopu mumwechete pamusoro pavo. Mweya Mutsvene unoda kureva chimwe chinhu kukereke iyoyo, havangatongobvunzi chero munhu kuti vangaite izvi kana izvo here. Munhu mumwe nemumwe anenge achisangana naMweya Mutsvene. Ndiratidzei neBhaibheri kuti chikuru chii, muBhaibheri, chinopinda mukuru kukereke panzvimbo? Ndizvo chaizvo, hongu, baba, rusununguko rwekereke yepanzvimbo, kereke imwe neimwe yakazvimiririra. Zvino, hukama, ndizvo zvakanakisa. Makereke ese anofanira kuva nehukama hwakadaro, pamwechete. Asi rusununguko rwekereke yepanzvimbo!
53-0614A TARIRO NEKUGUTSIKANA NEKUTENDA KWAKAMBOPIWA VATSVENE
Asi regai ndikuudzei, kereke yaMwari inotungamirirwa neMweya waMwari. Vanofamba nekufambiswa kwavanoitwa neMweya. Mwari haana kuvimbisa kungofamba nemabhishopu chete. Vakuru ndivo vanotungamirira kereke, makereke ese.
Nguva yekereke yechipiri yairatidza mwenje wechipiri wakatungidzwa. Asi waive wati ibvei pakubwinya kwemwenje wekutanga. Chiedza chawaipa chaive chatanga kudupuka sezvo vaive vachibva kuChokwadi chekutanga cheMagwaro.
Kereke imwe neimwe yaive yava nemunhu mumwechete aive asimudzirwa kuti atonge kereke.
Pergamosi yaive nguva yekereke yechitatu yakaona mubato weRoma Constantine achimanikidza mazwi asimo muMagwaro kuti apinde mudzidziso yekereke pakanzuru yeNicaea muna 325 AD. Izvi zvakabereka dzidziso yeTiriniti yeVanhu vatatu muhuMwari (hazvimo muMagwaro). Vanhu vatatu havagoni kuita Zita rimwechete saka Mwari akarasikirwa neZita rake rikatsiviwa nemazita matatu ezvinzvimbo. MaKristu anoti “Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene.” Asi havagoni kutiudza kuti Zita iroro nderekuti kudii. Bvunzai muKristu, “Zita raMwari nderekuti kudii?” Munowana mhinduro dzakadhakwa zvadzo. Saka Murairo wechitatu waive warasikirwa nezvawaireva. Hakuna anomhura achishandisa zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. “Jesu Kristu” ndiko kumhura kune mbiri kunorwadza kunonzwikwa kuchiitwa nevatadzi.
Mufananidzo wehuMwari weTiriniti wakanyorwa nemunyori anotenda kuTiriniti.
Uyu mufananidzo wechimanje-manje.
Iyi ndeimwe yerudzi rwemifananidzo inokanganisa mafungiro inoonekwa nemaKristu mundangariro dzavo pavanofunga nezvaMwari.
Hazvishamisi kuti nei vasingawani zita rimwechete rekupa Mwari wavo weTiriniti.
Zvino tarirai chinyorwa chepamabwe cheTiriniti yekare yechipegani chekuEgipita. Pfungwa imwechete iyoyo. Vanhu vatatu muhumwari humwechete. Musiyano mumwechete ndewekuti munhu mumwe nemumwe wepahumwari apa aive nezita rake, Isis, Horus naSeb nekuti vanhu vekuEgipita vakaziva kuti havagoni kuwana Zita rimwe rekupa vanhu vatatu ava vose. Vakava nechokwadi kwazvo. Havana kunyengera vanhu vaivatevera nekushandisa mazita ezvinzvimbo zvitatu vachinyepera kuti raive Zita rimwechete.
Ndakadzidza muchikoro chekereke uko “IHS” zvaive zvakanyorwa pamucheka waiiswa papurupeti paimira muparidzi. “I H S” zvaivewo zvakaiswa pamucheka wepaaritari yemutembere yekuEgipita sezvo aive mavara ekutanga emazita Isis, Horus, naSeb.
Kupindira kwakaita chipegani mukereke kwakatanga munguva yekereke yechitatu. Chipegani chakatosimba chirimo mukereke.
Nei chiIsiramu chakasimuka makore akapoteredza 630 AD? Nekuti Muhammed aisakwanisa kutevera Mwari aive neVanhu vatatu maari. Saka aisakwanisa kutevera Mwari asina zita. Saka akawana zita rimwechete raMwari rekuti Allah. MaMosiremu ane zita rekudaidza Mwari wavo. MaKristu haana Zita rekudaidza Mwari wavo. Saka Tiriniti yakakonzeresa kusimuka kwechiIsramu sekudzokera shure kubva pana Mwari achirasikirwa neZita rake rimwechete. Isramu ndicho chitendero chikuru chiri kunze chinotyisa chinomisidzana zvakanyanya nechiKristu. Chinhu chikuru chinotyisa chiri mukati mukereke ndiye muparidzi ari kuseri kwepurupeti anotisukurudza pfungwa netsika dzechipegani uye zvematongerwo enyika.
Jesu naPauro vakararama mazuva ekuipa uye huwori hwevabati vehushe hweRoma. Asi havana kubvira vaparidza zvematongerwo enyika kunze kwekutiudza kuti tinamatire hurumende dzedu nekuripira mitero yedu.
Kereke yakabva yawanana zvakazara nezvematongerwo enyika netsika dzechipegani. Mubati Constantine akagadza bhishopu weRoma semusoro wekereke muhushe hweRoma hwekumadokero.
Uku kwaive kubva zvakanyanya pakereke yekutanga yekatangwa nevapostora. Saka chiedza chechokwadi chakabva chatowedzera kudupuka. Mazano evanhu aive achitsiva Magwaro.
Hutungamiri hwevanhu hwakatsiva Jesu semusoro wemakereke.
Tiatira yaive kereke yenguva yechina yakaona hudzamu hwekurasika muNguva dzeRima apo kereke yeRoma yakatonga Europe. Vaive vatanga kutamba nemazwi asimo muMagwaro vakashandura Bhaibheri rinova Chiedza cheNyika. Ukatamba nemwenje unodzima.
KUIPA (EVIL) zvinoreva kuti kubva paShoko rakanyorwa.
Kubva pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva. Kuwedzera nekubvisa pane zvakanyorwa muBhaibheri. Kutendera mifungo yevanhu netsika dzechipegani. Kuramba zvakanyorwa nevapostora muTestamente Itsva. Chiedza chaive chaita chiduku-duku. Paive pasisina zvizhinji zvechokwadi zvakatendwa nekereke yeTestamente Itsva zvaive zvasara zviri mukereke.
Chero chinhu chaunotenda machiri chisina kunyorwa muMagwaro chakaipa zvachose. Fungai pamusoro pezvinhu zvatinoshandisa zvakanyanya zvisimo muMagwaro zvakaita sekuti “Meri Kisimusi”, “Tiriniti”, “pasita ndiye mukuru musoro wekereke”, “Isita egi,” “Isita rabhiti”, “muti weKisimusi”, “25 Zvita”, “Vakadzi vanoparidza”, “kumwaya vana mvura pakubapatidza”, “kutendera”, “masangano”, nezvimwe zvakadaro. Zvino tinopedzisira tisisazivi kuti Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekuti kudii.
Takabva zvakadii padzidziso yekutanga?
Chitsauko chino chinoona kereke ichitanga kudzokedzana munguva yeRumutsiridzo isati yaparara pakupera kwayo.
Sardisi, nguva yekereke yechishanu, yakaona vemasangano anopikisa Roma achipunyuka kubva mukereke yeRoman Catholic apo Martin Luther kuGermany akaparidza kuti vakarurama vachararama nekutenda. Ruponeso rwaivepo nenyasha kupfurikidza kutenda, kwete nemabasa. Chaionekwa zvakanyanya yaive shanduko yenzira yaive yofamba nezvinhu.
Kwaive kuita kwaiedza kudzosera vanhu kuMagwaro pachinzvimbo chekufamba vachibva kuMagwaro.
Chiedza chemwenje chaive chisati chasimba. Kwaive kuchiri nezvizhinji zvaive zvichiri zvakaipa mukereke. Martin Luther akazvisanganisa zvisina kuchenjera mune zvematongerwo enyika uye kupanduka kwevemumaruwa kwakaona vanhu vanosvika 100 000 vachiuraiwa.
Aive asina zaruriro yekuti Mwari aishanda sei nemaJuda akapedzisira achivazvidza.
Asi totenda Luther kuti rutivi rwaienda kereke rwaive rwashanduka.
Kumira kwake kwekushinga achipikisa kereke yeRoman Catholic yaitonga Europe uye yaida kumuuraya kwaive nekurudziro yakanaka kwazvo.
Vanhu vakaisa kutenda kwavo muhukama hwemunhu mumwe nemumwe naJesu pachinzvimbo chekuvimba nekuterera mabasa aiitwa mukereke mavo.
Chiedza chemwenje chaive chakutanga kujeka chichienda kune rumwe rutivi chichiswedera kurutivi rwaive nechiedza chekutanga chakatungidzwa musi wePentecosti.
Firadefia, nguva yekereke yechitanhatu, inoreva kuti rudo pakati pehama apo John Wesley kuEngland akaparidza hutsvene uye kuparidzira munzvimbo dzakasiyana siyana. Mambo wevechirungu aive nekutya kwekusagadzikika kwenguva. Nyika yaive iri munguva yekusagadzikika kukuru. Vaive vakatarisana nenguva yakafanana neyaive nevekuFrance vaive nekushanduka kwezvinhu kukuru kwakabvisa mambo kukagadza Napoleon ari mudzvanyiriri wezvechiuto. Hondo dzake makumi matanhatu dzakatorera France vanhu vaisvika miriyoni vakafa. Wesley akaramba kuparidza zvematongerwo enyika pachinzvimbo vanhu vakasimbirira paruponeso, hutsvene, uye kutenderera vachiparidzira. Kurudziro yake yakaponesa England kubva pashanduko huru uye kudeuka kweropa. Izvi zvakaitawo nheyo dzekuti England, nesimba rayo munezvehondo, itonge chikamu chimwechete kubva muzvina chepasi rese kuitira kuti mamishinari nechitauro cheChirungu zvipararire pasi rese. Bhaibheri reKing James Vhezheni kubva muna 1611 rakanyorwa nevadzidzi 47 venguva yaShakespear pakakomborerwa dzidzo yevanhu munezvemitauro nechisikwa chipenyu Munhu pazvisikwa zvakapoteredza chigaro chaMwari cheHushe. Bhaibheri iri rakaongororwa zvakazara negore 1750 sekuturikirwa kweshoko rimwe-nerimwe kwakanaka kubva pazvinyorwa zvekutanga. Bhaibheri ndiro raive mudzi wenguva yemamishinari yakatanga kunana 1792 apo mugadziri weshangu William Carey akaenda kuIndia. Hakuna bhuku raive rati rabata hupenyu hwevanhu sezvakazoitwa neBhaibheri reKing James Vhezheni. Nekudaro Satani akabva avenga Bhaibheri reKing James Vhezheni akakurudzira vanhu kuti varizvidze kasingaperi uye vachiedza “kuriita rechimanje-manje”. Ndapota musawire mumuteyo uyu. Ndiro Bhaibheri rakanakisa uye zvisinei kupikiswa kwese kwaringaitwe rinoramba riri ndiro riri pamusoro kwazvo sezvo mabhiriyoni emakopi aro akatengeswa mumakore 400 akadarika.
Bkaibheri riri kukwikwidzi King James Bhaibheri zvakanyanya nhasi iNew International Vhezheni (NIV) rakaburitswa muna 1978 rikashandura zvinhu 36 000 kubva muBhaibheri reKing James Vhezheni.
Zvaive zvisina kukwana zvakare saka rakazogadziriswa zvakare muna 1984 kuti ridiwe zvakanyanya nevaivhangera. Vhezheni remugore 1984 re NIV rakazogadziriswa zvakare muna 2005 rikadaidzwa kuti Today’s NIV kana kuti TNIV.
Bhaibheri rakashandurwa idzva iri rakaitwa kuti rive risina rutivi kuvanhurume kana vanhukadzi. Kana richitaura pamusoro “pemunhu” rinoti “vanhu”. Asi kana richireva munhukadzi harishanduki. Kurasika kuri pachena. Asi panotanga shanduko, kuita uku hakuzoperi. Kumwe kugadziriswa kwakazoitwa zvakare muna 2011 Vhezheni raidiwa kwazvo remuna 1984 rakabva rabviswa harichadhindwa zvachose. Vavhangeri vakatsamwiswa kwazvo.
MaVhezheni mana akasiyana mumakore 33. Mwari anogaroshandura ndangariro dzake here? Tarisirai Vhezheni rinotevera reNIV.
Shoko raMwari rekutanga rakare harigoni kushanduka kuti rienderane nekuita kwanhasi kwerudo rwevanhu rwenguva duku rwekodzero dzakafanana pakati pevarume nevakadzi. Hatigoni kushandura Mwari kuti afunge nenzira dzedu. Tinofanira kushandurwa isu kuti tifunge kunge Mwari.
Raodikia ndiyo nguva yekupedisira nguva yekereke yechinomwe inoperera munjodzi yemweya.
Yakapfuma uye iri muhutefetefe, asi haioniwo ibofu, ine nhamo uye yakashama, uye vurombo asi havazvizivi. Kereke isingapisi kana kutonhora inozoita marutsi mumuromo maMwari. Hupfumi hunotorwa kuita mupimo wekubudirira. Jesu, Shoko, anorambwa nemakereke akamira kunze kwemakereke, achigogodza kumunhu mumwe nemumwe anoda hake kumuteerera. Mwenga muduku wevanhu vakazvimiririra ndiye achadzoserwa pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva.
Nguva yakatanga zvakanaka muna 1804 nerumutsiridzo rweWelsh nekudururwa kweMweya Mutsvene kwemugore 1806 muAzusa sitiriti rumutsiridzo rwakaitika kuLos Angeles, kuAmerica. Asi rumutsiridzo urwu rwakangovapo kwemakore mana chete negore 1917 Pentecosti yakava bato remasangano akarongwa nevanhu pachinzvimbo chekufambiswa neMweya Mutsvene.
LIVE rakangonyorwa nerumwe rutivi runopikisa nerwekuti EVIL (KURARAMA NEKUIPA). Kufamba muchitevera Mweya wekutanga wenguva yekereke yekutanga.
Pentekosta yakadzikira makore akapoteredza 1920 kusvika yazomuka zvakare makore akunopera kwanana 1940. Muzvikamu zvesimba reMweya vaive bato guru kwazvo. Vakadzosa rubapatidzo rweMweya nezvipo zveMweya mukereke.
Kuratidzwa kunoshamisa kwemabasa eMweya kwaive kusiri nyaya yakazara. Kereke yaive ichifanirawo kudzoswa kuchokwadi chakazara chaive nekereke yekutanga.
JOHANE 16:13 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose;
Uhu hwaive hushumiri hwemutumwa kana nhumwe kunguva yekereke yechinomwe. William Branham kuAmerica akazivisa zvakavanzika zveMagwaro zvaive zvakavanzwa kuti isu titende kune zvakatendwa nekereke yekutanga.
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva enzwi romutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita.
MATEO 17:11 Akapindura, akati, Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Johane Mubapatidzi aive nemweya waEria kuti atange Evangeri uye kuzivisa Jesu kuvanhu. Haana chaakavandudza. Akazivisa rubapatidzo rutsva rwekutendevuka. Asi aive auraiwa panguva iyi.
MuVhesi iri Jesu anonongedzera mumwe muprofita aizouya achivandudza kereke yekupedzisira kuidzosera kukereke yekutanga.
Kana chokwadi chakazara chazivikanwa ndipo patichadzoserwa zvakazara pakutenda kwekereke yekutanga.
Asi vaparidzi vemharidzo vakatanga kuturikira zvakaparidzwa nehama Branham kuti zvireve dzidziso dzisimo muBhaibheri.
Dzidziso dzisina kubvira dzatendwa madziri nekereke yekutanga.
Vakatanga kugadzira dzidziso pasina Magwaro akanyorwa pamusoro padzo seKutinhira kunomwe Zita idzva raJesu, uye Kuuya kwaShe.
Gore rinoshamisa rakatorwa mifananidzo kumusoro kweFlagstaff musi wa 28 Kukadzi 1963 richifamba muchadenga chinhambwe chemakiromita 43. Gore rechipiri rakaonekwa mamaira makumi maviri kumashure kwaro raive raitwa nechiutsi cheThor roketi raive raputika kubva pabhesi reVandenberg Airforce kuCalifornia. Makore chaiwo haaitiki pachinhamwe chiri pakati pemakiromita 20 ne 80 muchadenga.
Mufananidzo uyu wakatorwa kubva paWinslow unoratidza makore maviri aya. Gore duku rakaitwa nechiutsi riri kuonekwa kuseri kweGore guru rakaitwa nemweya unoshamisa.
Makore maviri aya akafamba achibva kumadokero nepamusoro peFagstaff achienda kumabvazuva. Gore rechipiri (rakaitwa nechiutsi) raionekwa pamifananidzo yakatorerwa paWinslow chete sezvo makore aya ese aifamba achienda nekurutivi kune Winslow. Mifananidzo yakatorerwa paTucson, Phoenix uye Prescott yaionekwa neparutivi zvekuti yairatidza Gore raive pamberi raive rakakura raive rakaitwa nemapapiro evatumwa sezvo pasina chiutsi chendege kana maroketi chakaita gwara razvinosiya pazvinofamba (gwara rinosara panogadzana chiutsi) zvinozoita gore pachinhambwe ichocho. Mafuta anoshandiswa pakufambisa ndege kana maroketi anoita hunyoro hunozogadzana mugasi razvinoburitsa.
Mazuva masere mumashure mekuonekwa kweGore iri mamaira mazana maviri kumusoro pedyo nemakomo eSunset Peak neRattlesnake Mesa, vatumwa vanomwe vakauya kune hama Branham kuti vavape basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe.
Hama Branham vaive vasina chavaiziva pamusoro peGore rinoshamisa rakaonekwa rikatorwa mifananidzo vakaita kukanganisa kwekufunga kuti Gore raive raitwa nevatumwa vanomwe vachibva kwavari musi wa 8 Kurume paSunset Peak. Vatumwa ava vaive vaita Gore mazuva masere vasati vazviratidza kuhamaBranham. Havana gore ravakazoita pavakabva kwavari.
Zvisinei vanotenda kumharidzo havana kutarisa zvinhu zvakakosha zvese izvi saka vanobva vafuratira zvimwe zvinhu zvakakosha. Mapasita emharidzo vanoti “Gore guru” raive kuuya kwaShe. Raizivisa kuti Nyasha dzaive dzaguma. Jesu aive auya. Zvino kwaibva kwaitawo kuuya kweMutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10.
Zvaivewo nechekuita neKutinhira kunomwe kwekunaZvakazarurwa Chitsauko 10. Fungidziro dzevanhu hadzina miganhu. Kunozongoitawo mumwe anotora zvese anobvuma chero chinhu chaanzwa.
Paive pasina chiso chemunhu paGore. Fotositeti yegore yakatorwa mumagazini reLife pakavha rekuseri yairatidza zviratidzo zvechiso chemunhu.
Mufananidzo weGore wekutanga wakatorwa kubva paTucson waive usina chiso.
Chiso ichi chakaonekwa apo hama Pearry Green vakaita fotositeti yemufananidzo wekutanga.
Vamwe vatendi vemharidzo (message believers) vakabva vapenda chiso chemunhu mukati memufananidzo weGore iri. Izvozvi vanhu vemharidzo vakutenda kuti chiso ichi chaitoonekwa mumufananidzo. Saka kukanganisa kwakabva kwapararira. Tarirai kuti mufananidzo wekutanga chaiwo waifanira kutenderedzwa madigirizi makumi mapfumbamwe kuti chiso ichi chimire zvakanaka.
Vafundi si kana kuti mapasita emakereke emharidzo vanoti Zvisimbiso zvinomwe zvakazarurwa, kwete kungoziviswa chete.
Zvisimbiso zvichazarurwa chete kana Gwaiana raburuka kubva pachigaro chengoni saka vakataurawo kuti nguva yengoni nenyasha yaive yapera mugore ra 1963, kunze kwekuMwenga waKristu. (Zvisinei nekuti izvi zvinorevei, nekuti hazvisi muMagwaro zvachose).
Bhuku remharidzo pamusoro peZvisimbiso zvinomwe rinojekesa kuti hama Branham vakapihwa zaruriro yeZvisimbiso zvinomwe. Zvaive zvakaita sekuti aive akamira pakadaro apo akatarisa zvichizarurwa.
Ndizvo zvinoreva muprofita. Mwari anomutora omuisa kusi kwemiganhu yenguva kuti aone zviitiko zvenguva inouya zvisati zvaitika. Muprofita anobva adzoka kwatiri kuzotiudza chaizvo zvichaitika.
Mwari haaiti chinhu asina kutanga achizivisa.
AMOSI 3:7 Zvirokwazvo, Ishe Jehovha haangaiti chinhu, asina kumbozivisa varanda vake vaporofita zvakavanzika zvake.
Hakuna munhu munhorondo yekereke aive ati azivisa Zvisimbiso zvinomwe zvakanaka. Hama Branham vaive vekutanga kuita izvi.
Zvisimbiso chaizvo zvichazarurwa apo Mwenga waKristu anenge akudenga mumashure mekutorwa kuti anosangana naShe kumakore.
Achitaura nekereke yeRaodikia Mwari akati:
ZVAKAZARURWA 3:15 Ndinoziva mabasa ako, kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa.
16 Nokuti unoti, ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi chinhu; usingazivi, kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usina chokufuka.
17 Nokuti unoti, ndakafuma ndakafumiswa, handishaiwi chinhu; usingazivi , kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu risinechokufuka.
Iyi inguva yerima yekuramba zvinhu zviri pachena. Hakuna kereke inobvuma kuti kutukwa kunorwadza uku kunotaura pamusoro pavo. Vanhu vakazvimiririra vari mukereke ndivo vanogona kunzwa kudana kwaJesu. Vanofanira kuva nekushinga pakuramba kubvumirana nevakuru vemakereke.
Vanofanira kuva nemuono wakadzama kuti vaone kuti kunyengera kwechitendero kutori pamapurupeti emakereke avo. Kereke ingadai isiri pachidanho ichi dai chokwadi cheBhaibheri chaiparidzwa zvakazara kubva pamapurupeti emakereke avo.
Kereke imwe neimwe ine zvinhu zvainogona, asiwo ine zvizhinji zvainotadza. Kereke yeRaodikia iri kudaidzwa kuti itendeuke nekushingaira. Saka mune kutadza kuzhinji kunoda kugadziriswa.
Asi kereke imwe neimwe muRaodikia nhasi inonzwa iri yakarurama uye ichivimba kuti iyo yega ndiyo ine chokwadi chese. Kereke imwe neimwe inofungira kuti ndiyo ine zvese saka haide chiro. Vanonzwa kunge vasingamboda kugadziriswa.
Munguva ino yechiKristu chemakwikwi, kereke yega yega inofungira kuti iri nani kupinda dzimwe dzese.
Chinhu chinosuwisa chemaKristu akaponeswa achinopinda munguva yeKutambudzika kukuru nekuti vanofunga kuti kurwisana neBhaibheri, vachifuratira mamwe Magwaro vachiti haana kukosha kana kufanira, uye kusaziva Bhaibheri hazvina basa.
Ino ndiyo nguva yega yaburitsa Jesu, Shoko raMwari mukereke. Mazwi akabatwa panotaura vanhu anotendwa maari nevanhu vanotenda kumharidzo haana nheyo dzeBhaibheri. Haagoni kurondwa kubva paGwaro kuenda pane rimwe Gwaro muBhaibheri. Kutinhira kunomwe hakuna kunyorwa muBhaibheri. Asi vafundisi kana mapasita emharidzo anotoita dzidziso huru kubva paKutinhira uku. Kune ndudzi dzakawandisa uye nyaya dzakasiyana pamusoro peKutinhira kunomwe, zvekuti “vemharidzo” vapatsanurana nekupesana kunge chivoni-voni chakapwanyika.
ZVAKAZARURWA 3:20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza; kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova ndichapinda kwaari, ndicharayira naye, naiye ucharayira neni.
Kristu, Shoko raMwari, ari kunze kwekereke. Uye haazviratidzi kukereke yese.
Vanhu vanoda kereke yavo kukunda kuda kwavanoita Bhaibheri. Mbiri, kutendwa kuvepo kwako nevanhu, nekuchengetedzeka vari muruzhinji ndicho chinangwa chavo chikuru.
Jesu anozviratidza kumunhu akazvimiririra.
Mufundisi kana kuti pasita anozviti musoro wekereke. Muviri mumwe haugoni kuita misoro miviri. Saka Jesu, Musoro wechokwadi, anobva amira kunze.
Kupesana kwezvinhu kukuru kwazvo. Izwi rekuti “pasita” mufundisi muBhaibheri redu rechishona rakashandiswa richinzi mufudzi rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva asi zvisinei akatora chinzvimbo chaKristu semusoro wekereke.
Mufundisi anomira semusoro “pachinzvimbo chaMwari”.
MuchiLatini zvinoreva kuti VICARIVS FILII DEI. Mamwe mavara echiLatini anomiririra manhamba.
Kuverenga uku kunoburitsa chiverengo 666. chiratidzo chechikara.
Kana vachinyora mabhii mahombe pamabwe maRoma aishandisa V kuti amiririre U sezvo mitsetse yakaswatuka iri nyore kunyora.
Ndicho chikonzero nei vana “U” vaviri vainyorwa sekutu VV akazoita W wedu.
Ndiko kutevedzera kwakaita vemasangano anopikisa kutevedzera muenzaniso waamai vavo kereke yeKatholic yavakabuda mavari patinonyengerwa kutevedzera chiratidzo chechikara.
ZVAKAZARURWA 4:1 Shure kwaizvozvo, ndakatarira ndikavona mukova wakazaruka kudenga; nenzwi rokutanga randakanzwa rakaita serehwamanda richitaura neni; richiti: Kwira pano, ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvo.
Shure kwaizvozvo. Shure kwei? Mumashure mekupera kwenguva nomwe dzemakereke. Johane anotorwa kukwira kuDenga pakupera kwenguva dzemakereke kuratidza kukwira kuDenga kwekereke yaMwari. Hwamanda inomudana achipinda nepaMukova kuDenga. Jesu ndiye mukova wekukwira kudenga.
Kubva mugore ra 2017 Trump akatanga kuzivikanwa kwazvo semutungamiriri wenyika yeAmerica. Mwari arikushandisa murume uyu sechiratidzo chenguva here (hwamanda the trump) nekuti ari kudzosera Jerusarema kuti rive guta guru reIsraeri?
Johane anonoratidzwa zvinhu zvichatevera kuitika kubva apa, mumashure mekunge kereke yatorwa yakwira kudenga.
ZVAKAZARURWA 4:2 Pakarepo ndakava muMweya; tarira chigaro chovushe chakagadzwa, momumwe agere pachigaro.
4 Kwakanga kunezvigaro zvovushe zvinamakumi maviri nezvina zvakanga zvakakomberedza chigaro chovushe; napazvigaro pakanga pagere Vakuru vanamakumi maviri navana, vakapfeka nguvo chena; vakanga vanekorona dzendarama pamisoro yavo.
Mwari mumwechete agere pachigaro chevushe akabata Bhuku redzikinuro muruvoko rwake. Vakuru makumi maviri navaviri, nevanegumi navaviri madzitateguru emarudzi ekuTestamente Yekare uye Mapostora gumi nemaviri vekuTestamente Itsva vaive vagere vakapoteredza chigaro chevushe vachiratidza kuti kereke yaive yamutswa kubva kuvakafa iri Kudenga, uye vaive vakomberedza chigaro chaMwari.
Jesu ega ndiye anogona kutora Bhuku reDzikinuro orizarura. Saka Jesu ndiye ega anogona kutiponesa zvakare anogona kuva mumwechete anozarura maziso edu kuti tinzwisise zvatinoverenga muBhaibheri.
ZVAKAZARURWA 5:4 Ipapo ndakachema zvikuru, zvakusina-kuwanikwa munhu, wakafanira kuti azarure bhuku, kana kuverenga kana kutarira mairi.
5 Zvino mumwe waVakuru wakati kwandiri; Usachema hako, tarira, Shumba yorudzi rwaJudha, Mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nokusunungura nezvisimbiso zvayo zvinomwe.
ZVAKAZARURWA 5:7 Iro rikavuya, rikatora bhuku muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe.
Jesu ndiye akakosha Kudenga. Iye ega ndiye anogona kubata Bhuku reDzikinuro, Bhaibheri.
Iye ega ndiye anogona kubata Bhuku iri ozivisa zano reruponeso achidzika kupinda mumakore 2000 enhorondo yekereke. Iye ega ndiye aigona kutenga Ruponeso rwaakapa pachena nenyasha.
Ichi ndicho chitsauko chakavanzika.
Jesu anozarura Bhuku yeDzikinuro yakasimbiswa neZvisimbiso zvinomwe.
Asi tinofanira kuziva zvakawanda zvezvakavanzika izvi kuti tigadzirire Kuuya kwaShe wedu.
Saka Mwari akatora mutumwa wechinomwe, mukereke yekupedzisira kana kuti mukereke yechinomwe, akamuisa kusi kwemiganhu yenguva kuti aone chiitiko ichi chichiitwa sekuti aitovepo.
Izvi zvakamupa zaruriro yechisimbiso chechinomwe.
Akagona kutiudza pamusoro peZvisimbiso zvitanhatu, asi chechinomwe ndicho chakavanzika chakazara sezvo chichitaura pamusoro peKuuya kwaMwari. Ndicho chikonzero nei Chisimbiso chechinomwe chakaparadzaniswa neZvisimbiso zvitanhatu zvekutanga. Hachina kutaurwa muchitsauko chechitanhatu ichi sezvo chiri chakavanzika chisina anoziva.
Kuziviswa kweZvisimbiso nemuprofita wenguva yekupedzisira kwakafanana nekuzarurwa kweZvisimbiso mumashure mekunge kereke yaenda kuDenga, muzvikamu zveruzivo rwuripo pamusoro pezvakavanzika izvi rwakapiwa kumutumwa wechinomwe. Akaona chiitiko chenguva inouya ichi akadzoka kuzotiudza nezvacho. Saka zvakada kungofanana nekuti Zvisimbiso zvakazarurwa.
Mwari anotanga azivisa kuzarurwa kweZvisimbiso asati azvizarura mumashure mekukwira kudenga kweMwenga wake muChitauko 6.
Bhuku remharidzo raakaparidza pamusoro peZvisimbiso zvinomwe rinonzi “The Revelation of the Seven Seals” (“Zaruriro yeZvisimbiso Zvinomwe”). Zvisimbiso zvakazarurwa muzviratidzo, muzaruriro yezviitiko zvenguva inouya zvichaitika kana Mwenga waKristu akwira kuDenga.
Musaite kukanganisa kwekufunga kuti “kuziviswa kwechiitiko” ndicho “chiitiko chacho”.
Pane musiyano mumwechete mukuru kwazvo pakati pezaruriro nechiitiko chaicho. Kana Zvisimbiso zvinomwe zvikazarurwa zvechokwadi, kereke yechokwadi inenge yava Kudenga, zvakavanzika zvese zvinobva zvaziviswa zvakazara.
Asi kuratidzirwa kwechiitiko ichi, inongova zaruriro yekuvhurwa kweZvisimbiso, kunotendera Mwari kusazivisa zvimwe zvinhu kana rumwe ruzivo. Saka chii chatisingazivi pamusoro peZvisimbiso zvinomwe?
Hatina chatinoziva pamusoro “peChisimbiso chechinomwe” chinova Kuuya kwaShe.
64-0719M MUTAMBO WEHWAMANDA
Chisimbiso chechinomwe hachisati chazarurwa, munozviziva. Ndiko Kuuya kwake.
Tinoziva kuti chisimbiso chechitanhatu chinomiririra nguva yeKutambudzika kukuru.
Chisimbiso ichi chichazarurwa nemaprofita maviri Mosesi naEra vanozoita zvavanoda nemamiriro ezvinhu panyika kana mamiriro ekunze. Saka isu, kana zvichienzaniswa, tine ruzivo rwenguva yeKutambudzika asi tinoziva zvishoma kwazvo. Maprofita echiJuda ndivo vachaziva zvese. Vachaziva zvizhinji kupfuvura isu.
63-0323 CHISIMBISO CHECHITANHATU
Zvino panobva pauya maprofita maviri vakamira pano neShoko raMwari kuti vaite chero zvavanoda nemamiriro ezvinhu kana ekunze, vanozunza nyika. Zvinobva zvaratidza kuti ndiyani anozviita. NdiMosesi naEria, ‘nekuti ndihwo hushumiri hwavakaisirwa; vose varume vaviri. Oh, mai. Mazviona here manje? Maona kuti Chisimbiso chechitanhatu chii? Ndivo vaprofita ivavo. Zvino tarirai. Musarege zvichikudzipai, asi tarirai kuti chii chinozarura Chisimbiso ichocho. Maprofita. Mazviona? Amen. Ndizvozvo. Oh, tiri kurarama munguva yegondo, hama, musoro uri pakati pemakore. Vanozarura Chisimbiso chechitanhatu. Vane simba rekuzviita. Amen. Icho chisimbiso chenyu cheChitanhatu chiri kuuya chakazarurwa. Mazviona?
Sezvo ari maprofita maviri anozarura Chisimbiso cheChitanhatu, kereke haizivi zvizhinji pamusoro penguva yeKutambudzika. Tinokwanisa kutaura pamusoro pemamiriro ezvinhu achishandurwa nemazwi edu tigere muhutefe tefe hwemasofa edu asi achava “pasi netsvina” mumigero mumutsetse wemberi weIsraeri munjodzi huru sezvo vachaunza zvinhu zvemweya unoshamisa zvatinogona kutaura nezvazvo chete.
Chisimbiso chechishanu chinoshanda nemaJuda akashungurudzwa mukati menguva nomwe dzemakereke. Vanoita rutivi rwepiramidhi rwakasiyana rwakaratidzwa pasi apa. Horokasiti pakafa maJuda mamiriyoni matanhatu ndiko kwakaita kushungurudzwa kwavo kukuru. Kwaive chiratidzo chezvichava nguva yeKutambudzika kukuru. Nenzira imwe yaive nguva duku yeKutambudzika zvisinei nekuipa kwayo kwese. Saka nguva yeKutambudzika kukuru ichadarika izvi nekure.
Mukana uri pakati peZvisimbiso zvitanhatu muChitauko 6 nechisimbiso chechinomwe muChitsauko 8 unomiririra zvakavanzika zvakapoteredza Kuuya kwaShe. Chisimbiso chechinomwe kana kuti Dombo reMusoro wekona ndiko Kuuya kwaShe.
Asi chisimbiso ichi chakaenda mberi chikataura pamusoro pemaJuda 144 000 vanouraiwa pakupera kwenguva yeKutambudzika kukuru. Tinoziva nhorondo yemaJuda asi hatigone kutevera Chisimbiso chechishanu pachinopinda munguva yeKutambudzika sezvo Mwari asina chaakatiudza pamusoro peKuuya kwake uye akataura zvishoma kwazvo pamusoro penguva yeKutambudzika kukuru. Mwenga anopunyuka nguva yeKutambudzika saka harisi baasa redu kuti titsvagane nezvinhu izvozvo zvese.
ISAYA 57:1 ……. kusina munhu anorangarira kuti vakarurama vanobviswa pazvakaipa.
ZVAKAZARURWA 3:10 Zvawakachengeta shoko rokutsungirira kwangu, ndichakuchengeta vo panguva yokuidzwa yoda kuvuya panyika yose, kuidza vanogara panyika.
Zvisinei kereke yechokwadi haizopindi munguva yeKutambudzika kukuru.
Mwenga waKristu anokwira kudenga mukati meChisimbiso chechina (zvinoratidzwa nechinongedzo chitsvuku). Chisimbiso chechina hachina kuziviswa zvakazara sezvo tisingazivi kuti mutasvi webhiza raantikristu ndiyani, Pope wekupedzisira. Anodaidzwa kuti Rufu.
Rufu runopinda chete kana hupenyu hwabuda.
Saka mumashure mekutorwa kwekereke neMweya Mutsvene ichikwira kudenga ndipo pachaziviswa Pope wekupedzisira. Rufu negehena zvinomutevera saka tinokwanisa kufungidzira chete kuti izvi zvinorevei, sezvo tisina ruzivo rwakakwana rwezvinhu izvozvo zvichaitika munguva yeKutambudzika kukuru.
Saka hafu yechipiri yeChisimbiso chechina ndeyevasikana vakapusa munguva yeKutambudzika kukuru. Chikamu zvakare cheChisimbiso chechitanhatu chinova nguva yeKutambudzika kukuru. Ndicho chikonzero nei zvikamu zveruvara rweyero zviviri zvivi padanho rimwechete mumufananidzo uri pamusoro apa.
Bhiza rakachenuruka rinotasva naSatani musanganiswa weruvara rwemabhiza matatu adarika. Saka tiri munguva yekubatana kana kusangana kwekuipa kutatu kwadarika.
Mavhesi manomwe ekutanga emuChitsauko 6 anoenderana nenguva nomwe dzemakereke. Vhesi rechisere (sere chiverengo chinomiririra zvinhu zvitsva) inguva yeKutambudzika kukuru inoita makore matatu nehafu.
Chisimbiso chekutanga chine bhiza jena kana simba rinomiririra hunyengeri hwechitendero hunoramba huripo munguva dzese dzemakereke kusvika munguva yeKutambudzika kukuru. Saka chenjerai kuti muri kuteerera chii. Hunyengeri huri kurarama uye hwakasimba mumapurupeti ekuparidzira mumakereke edu nhasi. Asi Satani akadzidza zvakawanda munhorondo yemakereke saka nhema dzake dzakachenjera nhasi kudarika zvadzaive munguva dzese dzakadarika.
Papurupeti mukereke ndiyo nzvimbo yekupedzisira yamunogona kufungira kuti mungadziwana. Ndicho chikonzero zviri nemano akakurisa muhunyengeri.
MATEO 24:4 Jesu akapindura akati kwavari: Chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu.
Munotora nguva refu muchiteerera vafundisi kana mapasita kudarika vamwe vanhu vese. Ngwarirai. Tarisai muBhaibheri renyu (King James Vezheni).
Hafu yekutanga yechisimbiso chechina (vhesi 7, inoenderana nenguva yekereke yechinomwe) inoratidza kubatana kwehunyengeri hwezvitendero kubva munguva nomwe dzese dzekereke. Saka kutadza kwemazuva ano kwakachenjera. Munokwaisa kuziva chete kuti kutadza kana mukazoona kuti hamukwanisi kuzvironda muchizviwana mumavhesi akasiyana siyana eBhaibheri. Ndiyo nhowo yenyu chete. Vafundisi vanokunayai nemashoko akabatwa paitaura vanhu. Mukavabvunza kuti vatore zaruriro dzavo dzavanadzo kubva pamashoko akabatwa akagadzirwa aya vodzitsigira neBhaibheri. Havakwanisi.
Tichiwedzera, hunyengeri hwechitendero huri kubatana nekurudziro yezvematongerwo enyika bhiza dzvuku. Zvematongerwo enyika zvine munhu mumwechete ari pakutungamira pamusoro pevamwe vese. Vanobva vabatana nesimba remari. Vakuru vemakereke vari kuita mari zhinji kubva muEvangeri. Zvese pakutanga nepakupedzisira kwehushumiri hwake Jesu akadzinga “vaiti vemari” muTembere. Vaive vaita mari zhinji kubva pakutenda kwevanhu. Nguva haina kushandura zvinhu. Kereke ichiri bhizimisi rakanakisa. Ndicho chikonzero iri kusiiranwa kubva kuna baba kuenda kumwana. Yava bhizimisi remhuri.
Bhiza jena rekunyengera kwezvitendero sezvo murume weuta asina miseve. Asi Pope Nicholas I akagamuchira korona makore akapoteredza 860 AD.
Bhiza dzvuku resimba rezvematongerwo enyika rakaona Pope achitora simba rekugadza mukuru wemarudzi evatorwa muEurope samambo. Negore 1200 Pope Innocent III vaive vachizvitorera hukuru pamusoro pemadzimambo ese emuEurope.
Bhiza dema remadhimoni rakabuda kuuya kuzopikisana neRumutsiridzo rwakatanga muna 1520 pasi paMartin Luther nekuti aidaidza vanhu kuti vadzokere kuBhaibheri. Kereke yeRoma, nekurwisa Magwaro, vakaita chokwadi chekuti vanhu vaive vachifa nenzara yekushaiwa chokwadi.
Chitsauko 7 chinomira semukana uri pakati peZvisimbiso zvitanhatu zvekutanga nechechinomwe.
Chitsauko 6 chinopera neChisimbiso chechitanhatu chinotaura pamusoro penguva yeKutambudzika kukuru.
Chitsauko 7 chinotiudza kuti basa renguva yeKutambudzika kukuru nderekudaidza maJuda 144 000 uye kupeputsa ruzhinji rwevasikana vakapusa vakaponeswa nguva yeKutambudzika isati yatanga asi vakapofomadzwa nedzidziso dzemasangano emakereke avo. Vaive vakavarairwa kwazvo mukuchengetedzeka kwavaiwana nekuda kwekuenda kwavo kumakereke nguva dzose, saka vakafuratira vese vaive kunze kwemakereke avo vaiedza kuvabatsira saka havana kuzowana chokwadi cheMagwaro chakazara. Mukuipa kwenguva yeKutambudzika kukuru vachapera rudo rwekuva nhengo dzemakereke uye rudo rwavaive narwo nevakuru vemakereke runobva rwapera. Hakuna munhu anoda munhu anomupofomadza nekumunyengera. Nguva yese yehupenyu husingaperi vanhu vese vasingaverengeki vakaponeswa asi vasingazivi Bhaibheri vachava vagari vechidanho chechipiri kuDenga. Dai vakuru vaive vachiri kutungamirira kereke vangadai vakazarura masuwo kuvadzidzisi vangadai vakavadzidzisa chokwadi kubva muShoko raMwari rakanyorwa. Vangadai vaive chikamu cheMwenga waKristu.
Chitsauko ichi chinotanga neChisimbiso chechinomwe.
ZVAKAZARURWA 8:1 Wakati azarura chisimbiso chechinomwe, kunyarara kukava’po kudenga kunenge sehafu yenguva.
Ichi ndicho chakavanzika chikuru muBhaibheri sezvo chichishanda neKuuya kwaJesu kwechipiri kwatisinganzwisisi. Hatigoni kuturikira “runyararo” sezvo tisina gwara rekutevera. Mwari anoda kuti Kuuya kwake kurambe kuri chakavanzika. Vafundisi kana mapasita vanoti vanoziva Chisimbiso chechinomwe vari kukunyengerai. Vari kushingirira kuti vanzi vakachenjera. Zviri nani kuti muvaudze kuti vanyarare zvavo panyaya iyi. Chimiro chiri mumufananidzo wadarika chinotiyeuchidza piramidhi rakamirira Dombo reMusoro waro.
Dombo remusoro wepiramidhi kuuya kwaShe.
Kune chakavanzika chikuru chinoviga Mwari kuti tisamuone nemeso edu enyama.
Izvi zvinomiririrwa nemukana uri pakati pepiramidhi neDombo remusoro. Zvisinei nezvese zvatinoziva, mukana uri pakati uyu unomiririra chakavanzika chatisingazivi. Mukana usina chinhu muruzivo rwedu.
I TIMOTIO 3:16 Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo:
Chitsauko 8 chinozivisa hwamanda ina dzekutanga dzinonzwikwa munguva yeKutambudzika kukuru kuitira kumanikidza maJuda kuti adzokere kuIsraeri. Hwamanda nomwe idzi hadziriri munguva dzemakereke sezvo dzisiri hwamanda dzeEvangeri, dzinongori nguva dzekutongwa. Hamuna nyasha kana tsitsi muhwamanda idzi.
Hwamanda dzeEvangeri dzine tsitsi uye yambiro kutonga kusati kwasvika.
Hwamanda yekutanga ine zvimvuramabwe uye moto, sezvakaitika kuEgipita Mosesi asati atungamirira Eksodo yekutanga kubva kuEgipita achienda navo kuIsraeri. Izvi zvichaudza maJuda vari pasi rese kuti vakufanira kudzokera kuEgipita.
EKSODO 9:23 Mosesi akatambanudzira tsvimbo yake kudenga: Jehova akatuma kutinhira nechimvuramabwe, moto wemheni ukarova pasi; Jehova akanisa chimvuramabwe panyika yeEgipita.
ZVAKAZARURWA 8:7 Wokutanga wakaridza, kukauya chimvuramabwe nomoto zvakavhenganiswa neropa, zvikakandirwa panyika: ipapo chetatu chenyika chikatsva, nechechitatu chemiti chikatsva, novuswa bwutema bwose bwakatswa.
Hwamanda nomwe dzakasarudzika nekuti ihwamanda dzekutongwa.
Kazhinji hwamanda yeEvangeri yaizivisa hondo yemweya paiuya mutumwa nemharidzo. Zvino kana kereke ikaramba chokwadi chinoziviswa apa, Mwari aizodurura hosha yenguva duku yekutonga vanhu.
Evangeri, saJona, raiuya netsitsi pekutanga, kutonga kwaizouya kana tsitsi dzarambwa
Mwari haatenderi kereke kutongera vanhu.
MATEO 7:1 Musatonga, kuti murege kutongwa.
Saka vanhu havatenderwe kuridza Hwamanda dekutonga. Vanhu havatenderwe kutonga.
Asi Hwamanda nomwe dzinouya nekutonga. Iyi inguva yekutambudzika apo Mwari anodurura kutsamwa kwake panyika. Ava vanofanira kuva vari vatumwa vedenga vanopihwa basa rakaoma iri.
Kunewo nzira inoitika nayo zvinhu munguva dzemakereke. Chitsauko 2 chine nguva ina dzemakereke dzekutanga. Chitsauko 8 chine Hwamanda ina dzekutanga dzekutonga.
Hwamanda yechishanu ine kuzarurwa kwegomba regehena rinobva radurura simba remadhimoni kuti ritonge nekutambudza nyika, anomiririrwa nemhashu dzinoparadza. Aya madhimoni ezvechitendero. Ana mambo akapfekedzwa korona pamusoro pawo. Gore 1300 richangodarika Pope aive achipfeka korona yezvidanho zvitatu yaakaramba achipfeka kusvikira gore 1963. 1963 ndiro gore rakaziviswa Zvisimbiso zvinomwe. Chiedza chinodakadza ichi chakarova kwazvo hushe hwerima. Pope akabva afa gore iroro mutungamiri wenyika yeAmerica mumwechete aive wekuRoma John Kennedy akabva auraiwa. Kunyange Pope mutsva, Pauro 6, ane chaakaona chaive chisina kuita zvakanaka nekorona iyi nekuti mumashure mekugadzwa kwake akaibvisa akaramba kuipfeka. Saka chimwe chiedza chakapindawo muchiCatholic.
Zvino Hwamanda yechitanhatu yakaburitsa madhimoni makuru uye akasimba akamiririrwa nevarume vemabhiza, mamiriyoni mazana maviri awo ese. Rwizi rweEfuraitisi rwakataurwa ruchinzi rwaierera ruchibuda muEdeni uye rwaiitawo miganhu yenyika yechipikirwa. Saka aya madhimoni ezvechitendero. Rudzi rwawo ndirwo rwakaipisisa.
Chitsauko 10 chinoita mukana pakati peHwamanda nhanhatu dzekutanga neHwamanda yechinomwe.
NUMERI 10:2 Uzviitire hwamanda mbiri dzesirveri yakapambadzirwa; idzo dzinofanira kukubatsira kudana ungano nokuraira kuti mapoka afambe.
Hwamanda mbiri dzekudana ungano dzaimiririra Mosesi naEria munguva yeKutambudzika vanodaidza maJuda kuti vatange rwendo rwavo vachidzokera kuIsraeri kubva kwese kwavari munyika. MaJuda achawana Hwamanda mbiri dzeEvangeri idzi. Vamwe vese munyika vachange vachiwana Hwamanda dzekutongwa.
Hwamanda dzekutongwa dzinorira munguva yeKutambudzika dzichamanikidza maJuda kuti adzokere kunyange vaya vaisada.
Nguva yeKutambudzika inguva yekutongwa kusingaperi. Saka maJuda achapona sei? Vachaziva zvizhinji zvakadarika zvatinoziva pamusoro penguva yeKutambudzika nezviitiko zvayo.
William Branham akauya kuti mharidzo yake izivise Magwaro kwatiri maHedheni paaizarura zvishoma nezvishoma kunzwisisa kwedu kweBhaibheri. Akatanga muna 1933 zvishoma nezvishoma Mwari akazarura meso ake kuzvakavanzika zveShoko rake rakanyorwa. Makore makumi matatu akatevera Mwari akamubvisa panyika muna 1965. Nenguva iyi aive asiya maBhuku akakwana nemharidzo zvekuti mumazuva enzwi rake pamakaseti, maMP3, intaneti nemabhuku tinogona kudzidza zvakavanzika zveMagwaro zvatinoda kuziva kuitira kuti tive takagadzirira Kuuya kwaShe. Makore makumi mashanu mumashure merufu rwake tichiri kuedza kudzidza kuti toshandisa sei zvaakataura kuti titurikire Magwaro. Vanhu vazhinji veEvangeri vakarasika nekuteedzera zvaakataura vasina kuzvitsvaga nekuzvisimbisa neBhaibheri. Mapasita emharidzo vakati Hillary aizova mutungamiri wenyika yeAmerica musarudzo dza2016. Akakundwa, zvichiratidza kuti vafundisi kana mapasita emharidzo vakarasana nekufunga kwaMwari zvakadii.
Asi vaprofita vaviri kuvaIsraeri vangori nemakore matatu nehafu kuti vadaidze maJuda 144 000. Saka havana nguva yekudzidza kuvhura Bhuku nekuzwisisa zvakavanzika zvaro. Izvi zvakaitwa kare naWilliam Branham akatsanangura zvakavanzika achisiya zvakavanzika zvenguva yeKutambudzika zvisina chekuita neMwenga waKristu, achange ava Kudenga panguva iyoyo.
ZVAKAZARURWA 10:1 Zvino ndakavona mumwe mutumwa une simba achiburuka kudenga , akapfeka gore; murarabungu wakanga uri pamusoro wake, chiso chake chakanga chakaita sezuva netsoka dzake sembiru dzomoto.
ZVAKAZARURWA 10:2 Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruvoko rwake, akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa, norworuboswe pamusoro penyika;
Mutumwa mukuru uyu haaratidziki seGore rakaonekwa nepaduku pese.
Paive pasina chiso pamufananidzo wekutanga. Mimvuri yakadzima yakazoonekwa pafotositeti ndiyo yakaratidza chiso. Asi Mutumwa akataurwa apa aive nechiso chakaita sezuva. Chiedza chinobwinya.
Gore rakaonekwa muna 1963 raive risina muviri, asi musoro chete. Mutumwa aive negore raive rakafukidza muviri wake. Tsoka dzake dzaive mbiru mbiri dzemoto dzinobwinya. Paive pasina tsoka mugore rakaonekwa muna 1963. paive pasina mbiru dzemoto mbiri dzaionekwapo. Mutumwa anouya pasi panyika. Asi iro rakafamba richibva kumadokero richienda kumabvaziva richiramba riri mudenga chinhambwe chemakiromita 43. Gore iri rakatorwa mifananidzo kumusoro kweFlagstaff. Hama Branham vaive vasina chavaiziva nezvaro. Vaive kure nenzvimbo iyi mamaira mazana maviri kuTucson panguva iyoyo. Paive pasina munhu wezvemweya aizovingwa negore iri.
Kutaura kuti gore rakaonekwa muna 1963 rakazadzisa vhesi iri hazvisirizvo zvachose.
Saka muChitsauko 10 Jesu anouya pasi panyika semutumwa mukuru kuzomutsa vakafa vari panyika nemugungwa. Kuuya pasi semutumwa hakusi “Kuuya kwaShe” paanouya ari muMuviri weMunhu.
Asi, rangarirai, kana tikangopinda mumumvuri werufu, “Ndini Rumuko nevupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mukuru wemasimba ose aburuka akaisa hoko iyoyo pasi, ipapo, “nguva haizovapo.” Kana Mutumwa, wekunaZvakazarurwa chitsauko 10, akaisa tsoka yake imwe pamusoro penyika imwe pamusoro pegungwa, nemurarabungu pamusoro pake, Anopika, “Nguva haizovapo zve.” Kana nguva iyi yasvika, muchamutswa kubva pakati pevakafa. Apo vamwe vese varere pakadaro apo, imi munobva mapinda.
Iri raive gore 1964 nguva inoda kukwana gore rese mumashure mekuwonekwa kweGore muchadenga muna 1963 uye mumashure mekunge Zvisimbiso zvaziviswa. Akataura pamusoro peMutumwa muzvinhu zvaizoitika kumberi.
Uku hakusi kumutswa kubva kuvakafa kwaRazaro. Apa ndipo pamuchamutswa kubva kuvakafa, kana muchinge mafa Ishe vasati vauya. Apa ndipo panenge paguma nguva kuMwenga waKristu pavanobuda munguva vachipinda muhupenyu husingagumi. Ndipo panogumira nguva yekereke yechinomwe panopera nguva kumwenga waKristu nekuti miviri yavo inenge yashandurwa kuitwa miviri isingazofuka kuwora zve isingakanganiswi nenguva. Hamuzoshanduka kana kuchembera.
Vose vakafa munguva dzemakereke vakavigwa panyika kana mugungwa. Kristu, ari Mutumwa mukuru Mikaere, anouya kuzovatora murumuko.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga kumuka;
Kudanidzira ndiyo mharidzo yeMutumwa wechinomwe kuti agadzirire Mwenga waKristu Kuuya kwaShe kwechipiri.
ZVAKAZARURWA 10:3 Akadanidzira nenzwi guru seshumba inorira; iye wakati adanidzira, kutinhira kunomwe kukabudisa manzwi ako.
Iri ndiro izwi reMutumwa mukuru richamutsa vakafa.
Kutaura uku kwese kuri kuviri kuna ZVAKAZARURWA 10.3 kunoreva kumutswa kwevakafa.
JOHANE 11:43 Wakati areva izvozvo, akadanidzira nenzwi guru, akati: Razaro buda!
44 Wakanga afa akabuda, akapombwa makumbo namavoko nemicheka yebwiro;
MATEO 27:50 Zvino Jesu akadanidzira zve nenzwi guru, akarega mweya wake.
51 Ipapo tarira chidzitiro chetembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvika pasi; nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka;
52 mabwiro akazaruka nemitumb mizhinji yavatsvene, vakanga vavete, yakamutswa.
Tiri kurarama munzvimbo yezvikamu zvitatu zvinoti hurefu, hupamhi nehudzamu. Tinoonawo kuti tiri vasungwa venguva inova nzvimbo yechina. Hatina zvatinogona kuita pachedu sezvo tichifamba kubva mune zvakadarika tichienda mune zvichauya mupaipi renguva rakatiputira. [Tsananguro pamusoro pepaipi renguva: tinoriti paipi kana kuti pipeline nekuti tinenge tichibva nerutivi rumwe rwatisingakwanisi kutendeuka kudzokera narwo semvura inofamba mupombi isingagoni kubuda neparutivi kunze kwemuromo mumwe wakaiswa panoperera pombi yainofamba.]
Nzira imwechete yatingapunyuka kubva munguva nayo ndekunge tagamuchira miviri yakafuka kusawora. Nguva inotiita kuti tishanduke patinochembera, nekuomerwa kuzhinji apo simba redu rinodarika danho reruzivo rwedu, kusvikira patinosvika pamakore 25. Mumashure mezvo anenge ava materu sezvo simba remiviri yedu rinopera sezvo nguva inokanganiswa nemurairo wekuvora. Tinofa chinova chiitiko chisingafadzi mukurarama kwedu.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kubva kudenga nokudanidzira, nenzwi remutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa muna Kristu vachatanga kumuka;
17 Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwechete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose.
Kana vakafa vamutswa, miviri yedu inofanira kushandurwa kuti tigone kutorwa pakukwira kudenga pamwe nevatsvene vanenge vamutswa kubva kuvakafa.
I VAKORINTE 15:51 Tarirai, ndinokuvudzai chakavanzika: hatingavati tose, asi tichashandurwa tose,
52 Pakarepo nokubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira; nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora; nesu tichashandurwa.
Izvi zvinoratidzwa nemutsara webhuru pamufananidzo watabva pauri.
Denga rinoratidzwa rakapatsanurwa kubva kunyika nenguva. Denga riri kunze kwenguva sezvo kusina nguva kuDenga. Izvi zvinorevei?
ZVAKAZARURWA 10:6 Akapika naiye uri mupenyu nokusingaperi-peri, wakasika denga nezvirimo, nenyika nezvirimo, negungwa nezvirimo kuti nguva haizovipo.
Apa ndipo panoenda Mwenga waKristu kudenga kwavanenge vasiri varanda venguva nemirairo yayo yekuwora. Kana nguva isisiko hakusisinawo chinopera kana kuwora. Hakusisina hurwere sezvo huri chibereko chekuwora. Hakusisina rufu nekuti kana kusisina nguva, hakuna chinopera. Kunenge kusisina chivi nekuti rufu rwakapinda nechivi. Uye rufu runounza hupenyu hune muganhu kuvanhu nekuti vanofanira kuperezeka vofa.
Saka Rusifa paakaita chivi kuDenga, kwaive kwagara kuine nyika yezvikamu zvitatu uye nzvimbo, saka Mwari aifanira kumuitira nzvimbo yechina yenguva kuti agaremo.
Rusifa akashandurwa kuitwa Satani saka aida nzvimbo yemweya yekugara mairi. Mwari akamuisa iye negomba rake risina muganhu munzvimbo yenguva nekuti rimwe zuva achamedzwa neDziva remoto. Satani achararama kwenguva yakatarwa.
Zviitiko zvaingoitika kuDenga muzvikamu zvekuitika kwezvinhu asi paive pasina zviitiko zvakaipa kusvika Rusifa atadza kuDenga.
Nguva yakatanga pakatanga zvakaipa zvaSatani kukonzeresa.
Satani akazivisa kusarongeka. Saka zvakadaro nguva kufamba kwekusarongeka. Kuwedzera kwekusarongeka kunopa nzira kuchinhu chatinodaidza kuti nguva. Saka Mwari akabata Satani nesimba rake rekukonzeresa kuwora kwezvinhu nekufa kwezvinhu akazviisa munzvimbo yazvo zvega yemweya isingaonekwe inodaidzwa kuti nguva. Satani, mweya wezvakanaka-nezvakaipa aimiririrwa nemucherechedzo wemuti wekuziva zvakanaka-nezvakaipa mumunda weEdeni.
Mwari akashandura Rusifa kumuita Satani saka aifanira kumutsvagira musha saka akaita nzvimbo yenguva kuti ibate “zvakanaka-nezvakaipa” zvenyika yemadhimoni. Saka chivi chakabereka nzvimbo yenguva inosanganisa gomba risina muganhu rine mweya inobereka zvese zvakanaka (kuzviita kuti zvirasise) nezvakaipa (kuzviita kuti zvikuvadze).
Adamu akasikwa kunze kwenguva saka aive asina chaaikonzereswa nenzvimbo yechina yenguva yemweya yezvakanaka-nezvakaipa. Paakaita chivi, nyika yezvikamu zvitatu yakabva yatapwa munzvimbo yechina yenguva. Nyika yakatukwa nezvivi ichavapo kwenguva yakatarwa ine muganhu. Satani akaunza kuita kwemweya uku kubva munzvimbo yepamusoro yenguva kuti kuunze rufu, gehena uye guva panyika pazvakazarurirwa mukova naEva kuti zvipinde. Mweya yevanhu vanofa inopindawo munzvimbo yechina yezvakanaka-nezvakaipa kuti imirire zuva rekutongwa. Vanovimba nezvakanaka zvavakaita kuti pamwe zvingavapesanisa nehadesi. Asi zvivi zvavo zvaive zvakaipa. “Zvakanaka-nezvakaipa” zvikasangana zvinounza kuparara nekuti zvakanaka zvese muzvimbo yemweya yechina iyi zvine midzi yakaipa. Zvinodhaka zvinoita kuti vanhu vafare kwechinguvana pavanenge “vakadhakwa” asiwo inzwara dzemakemikari dzinonoparadza njere dzevanhu.
Hupenyu husingagumi ndihwo Mweya Mutsvene. Akangonaka.
Mumiviri yavo mitsva Mwenga waKristu anobva munzvimbo yechina yenguva uye haazokuvadzwi kana kukanganiswa nekurudziro dzayo dzakaipa.
Saka kana nguva ikaguma kwamuri, chivi chinopererwa nesimba rekubata kwamuri.
ZVAKAZARURWA 20:14 Ipapo rufu nehadhesi zvakakandirwa mudziva romoto, ndirwo rufu rwechipiri, ndiro dziva romoto.
Vagari vemweya vese vanzvimbo yechina vanoguma vava muDziva reMoto. Kwavari nguva inoenderera mberi kusvika vaparadzwa zvakazara. Satani paanomedzwa ndipo pachapererawo nzvimbo yechina. Inenge isisina chakaipa chainokonzeresera chero munhu. Zvino nguva inobva yaguma nekuti nguva ndiyo nzvimbo yaigara zvakaipa zvese zvaikonzeresa kutambudzika uye kusarongeka.
Mwenga waKristu anokwanisa chete kurarama kunze kwenguva ava mumuviri mutsva. Havazochembere kana kuvora nechero nzira sezvinoita miviri yatirinayo parizvino. Kwavari, kunenge kusisina nguva. Asi nyika yese nezviri mairi zvinoenderera mberi zviri pasi penguva. Nguva yeKutambudzika kukuru yemakore matatu nehafu inoteverwa nemakore 1000 erugare. Kwozouya Zuva reKutongwa. Vasikana vakapusa, vakaponeswa vanozogamuchira miviri yekubwinya vobudawo munguva. Vaya vanotongerwa kuenda kuDziva reMoto vanonoripira mhosva dzavo vobva pakurarama. Ndipo panopererawo nguva kwavari.
Kunenge kusisina nguva kuMwenga waKristu kana vava mumiviri yakafuga kusawora. Zviitiko zvinenge zvichiri kuitika asi zvinenge zvisisina chakaipa chazvinokonzeresa pavari sezvo maberekerwo avo ekare anenge afa uye Mweya Mutsvene unenge uchifamba mutsinga dzavo uchivatonga zvakazara. Zvino zvakaipa zvinenge zviri munzvimbo yenguva zvinenge zvisisakwanisi kuvaparadza kana kuvakuvadza nekuvakurudzira kuita zvakaipa. Vanenge vakurarama vasina zvivi sezvaive Adamu pakutanga. Asi panenge paine musiyano. Eva aive asina chaaiziva pamusoro pechivi asi kuda kuziva kwake kwakasikwa kuri maari semunhu kwakamuita kuti ade kutsvaga kuti chivi chaive chii.
Mwari akatikandira munyika ine zvivi inonyangadza nekutyisa. Saka kana tava kuDenga tinenge tisisina shungu nezvivi kana kuda kuziva pamusoro pezvivi nekuti takazviona zvese nezvazvinokonzeresa kwatiri. Kana tikakanganwa, mavanga ari mumavoko aJesu anotiyeuchidza nekukasika. Zvivi zvedu zvakakonzeresa izvozvo kwaari. Saka tinenge tisisina kuzvikudza kuDenga, asi kugamuchira nekutenda.
Kana nguva isisipo, Mwenga anenge akugona kurarama zvakazara asina zvivi.
Chinhu chakakosha: Mutumwa mukuru haauyi pasi panyika kuzozarura Bhuku.
Mutumwa mukuru anouya pasi panyika nekuti Bhuku inenge yazarurwa kare, zvakavanzika zvaMwari zvinenge zvapedziswa.
62-1230E ICHI NDICHO CHIRATIDZO CHEKUGUMA HERE
Asi Uyu haana kubva panyika. Anouya pasi panyika kubva kuDenga nekuti zvakavanzika zvinenge zvapedziswa. Uye kana zvakavanzika zvapedziswa, Mutumwa anoti “Nguva haizovi’po zve,” Kutinhira kunomwe kunobva kwareva manzwi ako.
Ko kana chiri chinhu chekutizivisa kuti topinda sei mukutenda kwekukwira kudenga? Ndicho here? Tichamhanya here, kukwira nepamadziro? Uye kune chiri kugadzirira kuitika here, uye ava vakachembera, vakakotama, vane miviri yaparara vachashandurwa here?
Mutumwa mukuru anouya panyika kana zvakavanzika zvapedziswa, zvaziviswa zvakazara.
Pakazarurwa Chisimbiso Chekutanga, Zvisimbiso zvaive muBhuku, Zvakavanzika zvakarehwa, kururamisirwa kunatswa, kereke yeRoman Catholic, vemasangano akabuda mairi! Uye tuhondo twavo tuduku netwunhu twese twakasiya zvimwe zvinhu zvisina kuziviswa muShoko raMwari, mutumwa wechinomwe anouya ozviunganidza ozvitsanangura. Mazviona? Ipapo, anopedzisa, Kutinhira kunomwe kworeva mazwi ako.
Zvakavanzika zveKutinhira kunomwe hazvisi chikamu chechakavanzika cheShoko rakanyorwa raizoziviswa nemutumwa wechinomwe.
Shoko rinouya “Bhuku yakanyorwa mukati”, rinenge rapedziswa kana izvi, zvakavanzika zvese zvapedzisa kutaurwa.
Hama Branham vakauya kuzozivisa zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri, kwete zvakavanzika zvisina kunyorwa zvakaita seKutinhira kunomwe, Zita idzva raJesu, neKuuya kwaShe. Hatina chatinoziva pamusoro pezvakavanzika izvi.
Tarirai, Zvakazarurwa 5:1. teererai zvino.
Zvino ndakavona muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe bhuku yakanyorwa mukati (runyoro rwaive nemukati) nokunze kwayo, yakanamatidzwa neZvisimbiso zvinomwe.
303 Zvino, pane zvakanyorwa mukati meBhuku. Asi kumashure kwayo kwaive neZvisimbiso zvinomwe zvaive kunze zvisina kunyorwa muBhuku. Zvino, uyu ndiye muzaruriri aitaura: Johane. Zvino, rangarirai, zvaive zvisina kunyorwa muBhuku.
“Mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe Zvisimbiso zvese zvakanyorwa mukati meBhuku zvinofanira kupedziswa.” zvinofanira kuitwa mumazuva iwayo, muzuva iroro.
...... “Uye panguva inenge ichinzwikwa mutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvese zvakanyorwa muBhuku zvinopedziswa.
Zvakavanzika zvakapedziswa zvakaziviswa nemutumwa wechinomwe zvinomiririrwa nemucherechedzo weBhuku rakazarurwa rakabatwa neMutumwa mukuru muruvoko rwake.
ZVAKAZARURWA 10:2 Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruvoko rwake, akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa, norworuboshwe pamusoro penyika
Hama Branham vakapedza kuparidza zvakavanzika muna Zvita 1965. Ipapo ndipo paizokwanisa kutanga kunzi Bhuku raive razarurwa nekuti zvakavanzika zvaro zvaive zvaziviswa. Mutumwa mukuru aisakwanisa kuuya pasi panyika izvi zvisati zvaitika.
Kana musingakwanisi kutsanangura kuti nei Jesu akanyora pasi kaviri muvhu nemunwe wake zvino Bhuku rinenge risati razarurwa kwamuri. Mutumwa wechinomwe akauya kuzotizivisa zaruriro yezvakavanzika zveMagwaro zvinozotigadzirira Kuuya kwechipiri kwaShe. Kana zvakavanzika zvapedziswa (zvakapedziswa muna Zvita 1965) zvino mumashure maizvozvo ndipo paizoburuka Mutumwa mukuru neBhuku yakazarurwa. Zvita wemuna 1965 asati asvika kwaive kuchiri nezvakavanzika zvaive zvakavanzwa zvaifanira kuziviswa, zvaireva kuti Bhuku yaive isati yazarurwa.
Ko kana chiri chinhu chekutizivisa kuti topinda sei mukutenda kwkukwira kudenga? Ndicho here? Tichamhanya here, tichakwira nepamadziro here? Uye kune chiri kugadzirira kuitika here, uye ava vakachembera, vakakotama, vane miviri yaparara vachashandurwa here?
Mutumwa anouya pasi panyika nekuti zvakavanzika zvinenge zvapedziswa chete. Nguva inobva yaguma Kutinhira kunomwe kwobva kwareva manzwi ako.
63-0724 MWARI HAADAIDZI VANHU KUNOVATONGA ASINA KUTANGA AVAYAMBIRA
Oh, havazi vazhinji pakuvengwa kwavo, asi iboka rine simba kwazvo rine Hupenyu husingagumi! Akati, “Vachamhanya mukati mehondo vodarika rusvingo.” hongu, “hondo” dzerufu hadzizowani simba pamusoro pavo, vachamhanya nemadziri. Vodzrika masvingo ari pakati pezvinhu zvenyika nezveMweya, voenda mumavoko aMwari, muHupenyu hukuru husingagumi. Ishe Mwari, tinokutendai naizvozvo. Tinoziva kuti nguva yava pedyo kusvika.
Mwenga waKristu anenge asina kuwanda pakuverengwa kwake. Rusvingo rwenguva rwunotipatsanura nenzvimbo dzemweya. Kana vakafa vamutswa, ivo neMwenga anorarama vachamhanya nemuhondo dzerufu nemadhimoni zvisingazogoni kuvamisa pavachadarika rusvingo rwenguva vachinotorwa kupinda muhupenyu husingagumi.
II SAMUERI 22:30 Nokuti nemi ndichavamba hondo: kana ndina Mwari wangu ndichadarika rusvingo.
Ndiko here Kutinhira kunomwe, kuri kugadzirira kureva manzwi ako imwe yenguva inouya, kuti kaboka kaduku kakaungana kagogamuchira Kutenda kweKukwira kudenga, kuti vapinde mukukwira kudenga paKuuya kwaShe? “Nekuti tichashandurwa”, nekukasika panouya vatumwa ivavo, “pakarepo, mukubwaira kweziso; tichatorwa pamwe neavo vakanga vavete, kunosangana naShe kumakore.
63-0318 CHISIMBISO CHEKUTANGA
Zvino kuri kuuya Kutinhira kunomwe kwakavanzika kusina kunyorwa zvachose. Ndizvo chaizvo. Ndinotenda kuti kupfurikidza Kutinhira kunomwe uku kuchaziviswa muzuva rekupedzisira kuti Mwenga waKristu agdzirire kuti agamuchire Kutenda kweKukwira kudenga; nekuti nechatinacho nhasi, hatingagoni kuita izvi. Kune chimwe chatinofanira kupinda machiri; hatitorina kutenda kwakakwana kwekuporeswa neMweya Mutvene. Tinofanira kuva nekutenda kwakakwana kuti tishandurwe pakarepo mukubwaira kweziso tobva tatsvairwa kubva panyika ino.
Kutinhira kunomwe kunoburitsa manzwi ako panguva inoshanduka miviri yedu. Nemiviri yedu yatiinayo izvozvi izere zvivi hatingaendi kunosangana naShe kumakore (“kana kukwira kudenga” sekutaura kunoita makereke).
Kutinhira kunomwe kunoreva panguva iyo Mwenga waKristu anorarama vanoshandurwa muviri wavo kuitira kuti vapihwe kutenda kuti vakwire kudenga kunosangana naShe Jesu. Kufamba tichikwira kudenga hakugoni kuitika mumiviri yatiinayo. Munotoda miviri mitsva kuita izvozvo. Kukwira kudenga uku, pakunoitika, kuchave kushaiwa basa kwemurairo wemamiriro ezvinhu.
Saka panguva imwechete Kutinhira kunomwe kunoreva manzwi ako kumaprofita maviri kuti kuvape simba rakazara kuti vatonge mamiriro ezvinhu panyika zvekuti vanokwanisa kushandura murairo wemamiriro ezvinhu voshandisa “kuipa kwemamiriro ekunze nezvimwe” sechombo chekuchengetedza maJuda.
Mugore 2018 Turky yakatumira matangi echimanje-manje muSiria kuti anotora dzimwe nzvimbo dziri mudunhu reAfrin. Munguva yeKutambudzika kukuru, antikristu paanotumira matangi mazhinji kunorwisa Israeri Mosesi anobva adana kudengenyeka kwenyika kunomedza matangi aya sekumedzwa kwakaitwa Kora naDatani.
NUMERI 16:31 Zvino wakati apedza kutaura mashoko awa ose, pasi pavo pakatsemuka,
32 Nyika ikashamisa muromo wayo, ikavamedza, ivo nemhuri dzavo navanhu vose vakanga vari vaKora nenhumbi dzavo dzese.
33 Naizvozvo ivo, nezvose zvavo, vakaburukira kubwiro vari vapenyu; ivhu rikavafukidza, vakaparadzwa pakati pevungano.
Kana Russia ikatumira mazana emajeti kunorwisa Israeri, Mosesi anongozadza denga nenhunzi kana mhashu dzinonovhara mainjini emajeti kana ndege dzavo dzodonhera pasi.
Kereke yeRoman Catholic yaAntiKrustu inofanira kuparadzwa nemunondo waMwari, Shoko rake mumiromo yevaprofita vake vaviri, nekuti kereke yeRoman Catholic yakashandisa simba rezvematongerwo enyika, rinotorwa semunondo wemadzimambo enzvimbo dzayo, kuti makumi emamiriyoni emaKristu auraiwe nekuti anopikisana nekereke yeRoma.
63-0321 CHISIMBISO CHECHINA
Zvino, takamunzwa achiuya husiku hwadarika nemunondo wake mukuru kuzouraya. Tinonzwa kuti iye anouraiwawo nemunondo, munondo weShoko. Shoko raMwari, rinopinza, rinocheka nekwese rinomuuraya, rinomuwisira pasi. Mirirai kusvika Kutinhira kunomwe kwareva manzwi ako kuungano iyoyo inogona kutora Shoko raMwari voriisa apo. Rinochekerera nekudambura. Vanogonawo kuvhara matenda; vanogona kuvhara izvi kana kuita izvo, chero chavanoda kuita. Ngaavongwe.
Achauraiwa neShoko rinobva mumuromo make; rinopinza kudarika bakatwa rinocheka nekwose. Vanodaidza mazana emabhiriyoni enhunzi kana vachida havo. Amen. Chese chavanoti chichaitika chinoitika, nekuti iShoko raMwari rinenge richibva pamuromo waMwari. Amen.
Kutinhira kunomwe kunoreva chete pakupedzisira panobva Mwenga waKristu maprofita maviri vanobva vatanga hushumiri hwavo kuvaJuda, nekuti kutinhira kunomwe kunoreva manzwi ako kuvese maJuda nemaHedeni. Kutinhira uku zviitiko zvakavanzika kwazvo zvatisina chatinoziva nezvako. Asi pakunotanga kureva, kana tichiziva Bhaibheri zvakakwana, tinofanira kugona kuona gwara reMagwaro kuti rititungamirire.
63-0324E CHISIMBISO CHECHINOMWE
“Zvichava rini, hama Branham?” handikwanisi kukuudzai. Handizivi. Asi rimwe remazuva iwayo, kana tikasasangana zvakare panyika pano, tichasangana kumberi pa—pachigaro chaKristu chekutonga. Uye munozoona kuti muimba iyoyo, zaruriro inobva kunaMwari (sezvazviri kune vamwe vavo vose), kuti izvo ... Chimwechete chezvakavanzika zveChisimbiso ichocho, chikonzero nei chisina kuziviswa, chaive Kutinhira kunomwe kunoreva manzwi ako, uye zvinenge zvakakwana zvakanakisa, nekuti hakuna chinoziva chero chinhu nezvako; hakuna kubvira kwanyorwa.
Kutinhira kunomwe kwaive munguva inouya. “Zvichava rini?” Gore rinoshamisa raive ratorwa mifananidzo mwedzi mumwechete izvi zvisati zvabvunzwa. Saka gore raive risiri Kutinhira kunomwe.
Tese hapana chatinoziva pamusoro peKutinhira kunomwe.
Chero chamunofungira kuti ndicho Kutunhira kunomwe, muri kunyepa. Muri kuzvinyengera imi nevamwe.
63-0320 CHISIMBISO CHECHITATU
Mwenga haasati amutswa. Mazviona hapasati paitwa rumutsiridzo apa, hapasati paonekwa Mwari achisanganisa Mwenga wake. Mazviona? Takakutarisira. Kuchatora Kutinhira kunomwe kusina anoziva nezvako kuti kumutse nekusanganisa Mwenga waKrustu. Achakutumira, akavimbisa izvozvo. Zvino, zvino, tarirai. Zvino, aive afa.
Tingangoti Mwenga akafa kusvikira Kutinhira kunomwe kwareva nguva inouya.
MATEO 25:5 Zvino chikomba chakati chichinonoka, vakakotsira vose vakavata.
6 Pakati povusiku vakanzwa mhere-mhere: Chikomba chovuya! Budai mumuchingamidze.
Mhere-mhere yepakati povusiku ndiko kutinhira kunomwe kuchava zviitiko zvisina anogona kutsanangura zvichamutsa vanhu vose vari mumakereke, Mwenga nevasikana vakapusa.
Mukadzi ikereke. Vese vasikana (makereke akachena), vose vakangwara nevakapusa, vaive vakotsira vakavata. Ndicho chimiro chemakereke ese nhasi uno vose vemharidzo nevemasangano. Vakaitwa kuti vakotsire nevafundisi vavo vose vanoti vanogona vanoramba vachiudza vanhu kuti kana vakangouya kukereke musi weSvondo wega-wega vakatenda zvese zvinotaurwa nevafundisi vachange vari pakanaka. Vakavarairwa zvavo. Vakavata mukusaziva munzvimbo dzakachengetedzeka dzemakereke. Makereke ese anoti, “Ndisu Mwenga waKristu”. Zvisinei nekuti kune masangano 45000 akasiyana siyana emakereke. Hakuna kana shungu mumakereke iwayo ese kuti vatsvage chokwadi muBhaibheri kuti vagopunyuka nguva yeKutambudzika inouya. Havatotyi kuti pamwe vafundisi vavo vari kuvarasisa. Havatodi kutombofunga kuti zvingangoitika.
VAFIRIPI 2:12 ... pedzisai kuponeswa kwenyu hekutya nokudedera.
Hakuna kereke inopa zano iri kuvanhu.
MaKristu haatendi kut Jesu akamira kunze kwemukova wemakereke ese munguva yeRaodikia. Asi Bhaibheri harina kusarudza. Saka kereke, nzvimbo yekuchengetedzeka kwemaKristu, ndiyo riva “rekusaziva Bhaibheri” sezvo pasina kereke inotsigira dzidziso dzayo dzese neBhaibheri. Hakuna pasita anogona kutsanangura Magwaro ese saka vanofuratira mamwe nekumati haana kukosha nekuti vanenge vasingagoni kuatsanangura. Mufundisi ega ega anoti anopa zvese mukereke make. “Chingotererai ini munowana zvese zvamunofanira kuziva.
Kereke yega yega ine dzidziso dzeBhaibheri asiwo vane dzimwe dzidziso dzisina kubva muBhaibheri dzinotorwa pamazwi akataurwa nevanhu netsika dzavo, zvirahwe zvevamwe vanhu vakakosha.
PaZuva rekutongwa kuchange kusina munhu akakosha, Shoko raMwari rakanyorwa chete. MaKristu anhasi asingazivi Bhaibheri hapana waachafadza Zuva iroro.
Mutumwa mukuru anenge ariwo neBhuku yakazarurwa muruvoko rwake kuti ape maprofita maviri, kuti vadzidze nekukasika zvakavanzika zveMagwaro zvakaziviswa.
63-0317E MUSIYANO URI PAKATI PENGUVA NOMWE DZEMAKEREKE NEZVISIMBISO ZVINOMWE
Ndakaona mumwe mutumwa mukuru achiburuka kubva kudenga, akapfeka gore: murarabungu... pamusoro pake, ... kana mukaona izvi ndiye Kristu (mazviona?), nekuti Iye muTestamente Yekare aidaidzwa kuti mutumwa weSungano, uye Iye ari kuuya akanangana nemaJuda, nekuti kereke inenge yapera. Mazviona? Zvakanaka ...
... uye chiso chake ... chaive chakaita sezuva, netsoka dzake sembiru dzomoto:
Munorangarira here Mutumwa uya kuna Zvakazarurwa 1? chinhu chimwechete. Mutumwa inhume, uye iNhume kuvaIsraeri. Mazviona? Kereke inenge yakwira kudenga. Mazviona?
Zvino, kana kuti inenge ichigadzirira kukwira kudenga. Anouya kuzotora kereke.
Tarirai migove miviri yebasa remutumwa wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10.
Anouya kuzotora kereke inenge ichigadzirira kutorwa kukwira kudenga uye kereke inobva yaenda pakarepo.
Mutumwa anouyawo akanangana nemaJuda nekuti nekukasika mumashure mekukwira kwekereke kudenga anobva atendeukira kumaJuda.
ZVAKAZARURWA 10:2 Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruvoko rwake, akaisa rutsoka rwake rwerudyi pamusoro pegungwa, norworuboshwe pamusoro penyika:
Asi ndiyani akazarura Bhuku kuti tiwane zaruriro yezvakavanzika zvaMwari, anova Shoko?
ZVAKAZARURWA 10: 7 ….. Asi
Shoko iri rekuti “asi” rinoshandura kufamba kwezvinhu zvose muChitsauko ichi.
Kana ndikataura kuti “ndinokufarira, asi ...” unofanira kubva waziva kuti nyaya yakutoshanduka.
Saka Zvakazarurwa 10:7 inoshandura kukosha kubva muizwi reMutumwa Mukuru achidaidza vakafa kubva kumakuva uye Kutinhira kunozarurira Kuuya kwaShe mukova nekugadzirira Mwenga kuti afambe achikwira kumakore, uyezve kugadzirira vaprofita vaviri kuti vagogona kushandura mamiriro ezvinhu.
Mutumwa mukuru anofanira kupa Bhuku rakazarurwa kumaprofita maviri ASI anotsanangura kuti Bhuku iyi yaive yazarurwa kare makore akati kuti nguva iyi isati yasvika kupfurikidza zaruriro dzaiparidzwa mumazuva ehushumiri hwemutumwa wechinomwe.
Zvakavanzika zveMagwaro zvichapedziswa. Pane kuita kwekukakavara pano. Achitarisa munguva yaizotevera Johane akaona mapasita emharidzo achikanganisa kwazvo kuti vazadzise mifungo yavo pachinzvimbo chekushandisa mashoko avakabata paitaurwa kuti vanzwisise Magwaro. Vatungamiri vemakereke emharidzo vangadai vakaita basa rakanaka kwazvo asi zvinoita sezvisingazoitiki saizvozvo.
Mupostora Johane, semuprofita, aikwanisa kunzvera Bhuku rakazarurwa. Raive richivava muzvikamu zvekupikiswa kwechokwadi kwaaive asangana nako asi raitapira mumuromo make apo aipupura rudzikinuro rwaMwari mukati mekuomerwa kwese kwaakasangana nako.
Maprofita maviri echiJuda achasangana nekuvava kukuru kwekuomerwa munguva yeKutambudzika apo marudzi nemadzimambo ekumabvazuva nemadzimambo ekumusoro anouya kuzovapikisa, asi vachavawo nekupupura kunotapira kwerudzikinuro rwesimba raMwari.
Apa ndipo pakapesana vanotenda kumharidzo nechirevo cheChitsauko ichi.
Vanotenda kuti mavhesi matanhatu ekutanga ndiwo Gore richiuya pasi panyika kuzopa Bhuku yakazarurwa rezvakavanzika zvakaziviswa kuna William Branham.
Izvi hazvisizvo zvachose. William Branham aifanira kuzarura Bhuku zvakamutorera kubva gore 1947 kusvika mugore 1965. Mavhesi matanhatu ekutanga eChitsauko 10 anotaura pamusoro pemutumwa mukuru achiuya panyika kuzomutsa vakafa. Zvino Kutinhira kunomwe kunobva kwagonesa kereke kuti igadzirire kunosangana naShe nekuenda kumusoro kumakore ichikunda mirairo yemamiriro ezvinhu. Panguva iyoyo Kutinhira kunomwe kunopawo maprofita maviri kumaJuda simba kuti vakurire mirairo yemamiriro ezvinhu vokonzeresa kuipa kukuru kunorwisa kuita kwemauto aPope waantikristu.
Pakupedzisira Mutumwa mukuru anopa Bhuku yakazarurwa kumaprofita maviri otsanangura kuti zvakavanzika zvakaziviswa kare nemutumwa wechinomwe. Maprofita maviri vanobva vaziva zvose zvakazivikanwa neMwenga waKristu uye vachiwedzera vachadzidza zvese zvakavanzika zvenguva yeKutambudzika kukuru zvatisingazivi.
Saka maprofita maviri aya achaziva zvakawandisa kudarika vamwe vanhu vose.
Chitsauko ichi chinobata pamusoro pehushumiri hwemaprofita maviri vanodzosera shure hondo dzezvakaipa kuitira kuti maJuda 144 000 vagone kunosangana naShe muIsraeri. Zvino maprofita maviri vanobva vauraiwa vokwira kuDenga. Uku ndiko kunenge kuri kuperawo kwenguva yeKutambudzika kukuru saka inenge yava nguva yekuunganidza marudzi kuenda kuAmagedhoni kuitira kuti Ishe aburuke kuzovaparadza.
Chisimbiso chechinomwe ndicho chakavanzika cheKuuya kwake kwechipiri.
Hwamanda yechinomwe ndiyo mucherechedzo weKuuya kwaShe kwechitatu kuzokunda paAmagedhoni ogadza hushe hwake hwenguva yerugare. Inoziviswa nekudengenyeka kwenyika uye zvimvura mabwe.
Vakuru makumi maviri nevana vanowira pasi nezviso zvavo pamberi paJesu. Hwamanda yechinomwe iyi inofainira kureva mumashure mekuenda kweMwenga waKristu kuDenga.
ZVAKAZARURWA 11:15 Zvino mutumwa wechinomwe wakaridza; manzwi makuru akava’po kudenga, achiti: Vushe bwenyika bwava bwaShe wedu, naKristu wake; uchabwubata nokusingaperi-peri.
16 Ipapo vakuru vanamakumi maviri navana vanogara pazvigaro zvavo zvovushe pamberi paMwari, vakawira pasi nezviso zvavo , vakanamata Mwari
Hwamanda yechinomwe iyi mutumwa wekudenga anenge achipa mutongo unoburutsa Ishe panyika kuAmagedhoni kunova Kuuya kwake kwechitatu.
Mutumwa wechinomwe kuRaodikia wekuna ZVAKAZARURWA 3:14 naZvakazarurwa 10:7 inhume yepanyika anozivisa zvakavanzika zvakavanzwa zveMagwaro kuti Mwenga anorarama agadzirire Kuuya kwaShe Jesu kwechipiri.
Mharidzo yemutumwa wechinomwe kukereke yeRaodikia ndeyetsitsi neyambiro kuti tigone kupesana nenguva yekutambudzika kukuru. Kutongwa kunozouya munguva yeKutambudzika kune avo vanoramba kana kuti vanoipisa mharidzo.
Tinofanira kuziva kuti tine ruzivo kana zaruriro yeZvisimbiso zvinomwe.
Kuzarurwa chaiko kweZvisimbiso zvinomwe kunoitika chete kana Mwenga waKristu atorwa akwira kuDenga.
61-0101 ZVAKAZARURWA CHITSAUKO 4. 2
Zvino, tinoona kuti mumashure, “Mumashure mezvinhu izvi.” Mumashure zvinoreva kuti “Kana nguva dzemakereke dzadarika.”
Zvino Johane akadaidzwa kuti auye, “Uya pano,” zvinoreva kuti “Kwira pano”. Akamuratidza zvose izvo zvaizoitika munyika munguva dzemakereke. Zvino nguva dzemakereke padzakadarika, tinoona kuti Johane aive rudzi rwemuKristu aizodaidzwa naKristu kumusoro. Ndizvo here? Akadaidzwa “Uya pano.”
KUTSANANGURWA KWAKAZARA KWENGUVA NOMWE DZEMAKEREKE CHITSAUKO CHEKUTANGA
Uye zvaive zvisiri kusvika kuna Zvakazarurwa 5:6-8 (inotevera Zvakazarurwa 4:2-3 muzviitiko zvenguva) kuti tinoona “Gwaiana” richitora Bhuku kubva “KWAARI”aive agere pachigaro chovushe, sezvinoratidzwa kuna Zvakazarurwa 4:2-3 uye 9-10.
Chitsauko 4 chinoona Johane achikwira kuDenga mucherechedzo wekutorwa kweMwenga waKristu (kunodaidzwa nevanhu kuti kukwira kudenga [Rapture]) panopera nguva dzemakereke.
Zvino chitsauko 5 chinouya mumashure meChitsauko chechina muzviitiko zvenguva.
Saka vakuru makumi maviri nevana, gumi nevaviri vavo ndivo vaapostora kubva kuTestamente Itsva, vari kuDenga panozarurwa chiitiko ichi. Saka kuzarurwa kweChisimbiso kunoitika chete kana Mwenga waKristu akwira kuDenga.
Takapiwa chiratidzo chechiitiko ichi apo vatumwa vanomwe vakauya neruzivo rwakakosha sezaruriro kuhama Branham kuti aparidze paZvisimbiso zvinomwe. Asi chitiko chacho chaicho, kuzarurwa chaiko kweZvisimbiso kuchigere kuitika. Mwari anotumira zaruriro chiitiko chacho chaicho chisati chaitika, kuti tigadzirire chiitiko chacho.
63-0324M MIBVUNZO NEMHINDURO PAMUSORO PEZVISIMBISO.
Mubvunzo: Kuna Zvakazarurwa vhesi 5 kusvika ku 9, ndivanani vaiimba Gwaiana parakatora Bhuku?
Ava ndivo vatsvene vakakwira KuDenga here?
.... Pane chakakanganisika. Pane chakakanganisika.
[Munhu aive muungano akakumbira hama Branham kuti vaverenge Zvakazarurwa 5:9 zvakare -Ed]
Vakaimba rwiyo rutsva, vachiti: Ndimi makafanira kuti mutore bhuku nokuzarura zvisimbiso zvayo; nokuti makabaiwa, ... (Izvi zviri pano. Zviri pano. Ndanga ndakanganisa pana izvozvo. Mazviona?... mukatengera Mwari neropa renyu vanhu vanobva kumarudzi ose, ...
.... Asi mamuona here achindimisa pamusoro paizvozvo? Ngaakudzwe...
Ndaive ndisati ndaverenga chimwe chikamu chaizvozvo. Mazviona, ndasvika pano: “uye...” tarirai pano. “ Vakaimba ruyo rutsva,” ndaibva ndamira. Mazviona? Asi tarirai pano, “Ruyo rwavakaimba, ruchiti, Makatengera Mwari neropa renyu vanhu vanobva kumarudzi ose, nendimi dzose navanhu vose.”
Saka Mwenga akapoteredza Chigaro chaMwari chevushe Jesu paanozarura Zvisimbiso.
Tinodzokera kuna Zvakazarurwa Chitsauko 11 nemutumwa weHwamanda yechinomwe.
16 Ipapo vakuru vanamakumi maviri navana vanogara pazvigaro zvavo zvovushe pambewri paMwari, vakawira pasi nezviso zvavo , vakanamata Mwari
Kana Hwamanda yekutonga yechinomwe ikareva manzwi ayo, vakuru makumi maviri nevana vanobva vawira pasi vachinamata Mwari kuDenga. Saka Hwamanda yechinomwe inoreva kana vapostora gumi navaviri vakwira kuDenga. Izvi zvichave mumashure mekukwira kwekereke kuDenga.
Saka mutumwa wechinomwe uyu anenge anehwamanda yechinomwe inova kutonga kwenguva yeKutambudzika kwekupedzisira Amagedhoni isati yauya inounza Kuuya kwechitatu kwaJesu kuAmagedhoni, haangavi mutumwa wechinomwe wekuna Zvakazarurwa 10:7 uyo hushumiri hwake hukuru hwaive kuzivisa Zvisimbiso nekuzarura zaruriro yeShoko rakanyorwa kuti agadzirire Mwenga Kuuya kwechipiri kwaJesu.
Zvakazarurwa Chitsauko 12
Ichi chitsauko chinoti rasisei chinoreva zvinhu zvakasangana.
Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 anouya panyika kunavose Mwenga nemaJuda.
Chitsauko ichi chinomiririra vose maJuda nekereke. Chinotaura kumaJuda apo Jesu akazvarwa akatorwa kukwira kudenga. Zvino maJuda akachengetedzeka sezvo Mwari aizovapofomadza kuti Iye atendeukire kuvaHedeni.
Vakashungurudzwa zvikuru kwazvo asi mweya iri pasi pearitari muChisimbiso chechitanhatu vanopiwa nguvo chena pavanouraiwa. Nekuparadzira maJuda pasi rese, Mwari aivachegetedza. Kana vakavuraiwa munzvimbo imwechete vamwe vakapararira kune dzimwe nzvimbo vanorarama. Nekuparadzirwa mukati memarudzi vaive murenje remweya. Mwari aizosimudza simba guru reAmerica kuti ridzivirire Israeri pakupera kwenguva yekereke yechinomwe.
Chaizodzoka kumaJuda munguva yeKutambudzika kukuru apo Mosesi naEria vanoshandisa Simba ravo pamusoro pemamiriro ezvinhu kuita kuti nyika imedze hondo dzese dzakaipa dzinoitirwa Israeri. Apa maJuda anenge ari murenje sezvo nyika dzese dzinenge dzichivaramba. Aive mutungamiri weAmerica Obama akaita kuti mubatanidzwa wenyika dzepasi rese (UN) upikise Israeri asati abva pachigaro muna 2017. Panezvemweya, ichi chaive chinhu chakaipa kuita. Kupikisa zvakaprofitwa pamusoro pekudzoka kwemaJuda kuIsraeri kupikisa kuda kwaMwari. Mutumgamiri wenyika Trump paakabvuma kuti aizoita Jerusarema guta guru reIsraeri muna 2017 mubatanidzwa wenyika dzepasi rese (UN) wakamupikisa nezvibodzwa 128 kuzvibodzwa 9 zvevaive kurutivi rwake. Trump nekushinga kukuru akafuratira hupikisi uhu hwese. Ndiko kuita kwerenje riri kuendwa neIsraeri. Kurambwa nekupikiswa nemarudzi. Asi maprofita maviri achavachengetedza mukati menguva yeKutambudzika kukuru.
Sekubviswa kwakaitwa maJuda pakukwira kuDenga kwaJesu, mufananidzo mumwechete uyu uchafukidzawo maHedeni.
ZVAKAZARURWA 12:1 Zvino kudenga kwakavonekwa chiratidzo chikuru ichi: mukadzi wakanga akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, napamusoro wake korona ine nyeredzi dzinegumi nembiri;
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Korona ndiyo kereke yekutanga yevaJuda nemarudzi gumi nemaviri evaIsraeri, zvino kereke yevaHedeni yevapostora gumi nevaviri. Mwedzi ndiwo murairo wevaprofita veTestamente Yekare. Zuva ndidzo nyasha dzevapostora veTestamente Itsava. Vapostora nevaprofita, Testamente Itsva neTestamente Yekare, zvinotungamirira vaHedeni nevaJuda kuna Ishe Jesu.
ZVAKAZARURWA 12:2 Iye wakanga anemimba, akadanidzira pakupona kwake, achitambudzika pakuzvara.
Abrahama aive wegore rinenge 1900 BC. Ndiko kwaive kutanga kwerudzi rwevaJuda. Jesu paaive ane makore 33 aive muduku kwazvo kana zvichienzaniswa nerudzi rwevaJuda. Izvi zvinoratidza zano raMwari redzikinuro renguva refu kuvaJuda.
MaJuda pachavo vaive vavarenje pamweya. Paive pasina muprofita aive ataura kwavari kwemakore 430. Roma yaive yavapamba mugore ra 63 BC ikavaisira vatongi vaive nehutsinye, makaro uye huwori. Vaiedza kumukira hurumende vaidzikisirwa zvakazara nemunondo.
ZVAKAZARURWA 12:3 Ipapo kudenga kwakavonekwa chimwe chiratidzo ichi: Tarira shato huru tsvuku, ine misoro minomwe, nenyanga dzinegumi, napamisoro yayo korona nomwe.
Shato ndiyo mucherechedzo waSatani. Satani aizotora hushe hweRoma ohushandisa kuparadza Jesu. Misoro minomwe ndiwo zvikomo zvinomwe zveRoma. Nyanga ndivo vadzvanyiriri gumi vane simba seremadzimambo vekupedzisira vachapa simba ravo remauto kuna Pope waantikristu wekupedzisira kuti atonge nyika munguva yeKutambudzika kukuru. Pompey, mukuru wemauto eRoma, akatapa Israeri muna 63 BC, gore rimwechete rakashandiswa chioko muhomwe naJurio Kesari kuti asarudzwe saPontif kana kuti Pontifex Maximus, muprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi naNimrodi. Korona momwe ndivo vaive vanhu vanomwe vekutanga vemhuri yaJulius Caesar vakazviita vabati veRoma kuti vatonge nehudzvanyiriri.
Jurio Kesari aive mudzvanyiriri kwehupenyu hwake hwese. Muzukuru wehanzvadzi yake Augusto ndiye akava mubati wekutanga. Akatora Tiberio seMwanakomana wake wekurera. Tiberio ndiye aive mubati pakauraiwa Jesu. Mwanakomana wemukoma wake Karigura akatonga kwemwedzi mishoma achibva arasika njere sezvo aifunga kuti aive Mwari. Akauraiwa makore anoda kukwana matatu nehafu akazotevera. (Aifunga kuti aive Mwari saka, saJesu, aive nemakore matatu nehafu chete ehushumiri). Sekuru vake Kiraudiasi akatora chinzvimbo achibva aroora mai vaNero. Mai vaNero vakauraya Craudiasi Nero achibva auraya mai vake achibva atangawo zvakare kuuraya maKristu, kusanganisira mapostora akati kuti. Zvino wechinomwe aive mukuru wemauto eRoma aibva kuSpain, Galba, akatora chinzvimbo chemubati nechisimba achibva auraiwa mumashure memwedzi minomwe. Mudzvanyiriri munezvehondo uyu ndiye akagumisa mutsetse werudzi rwevabati rwemba yaJurio Kesari.
Mhuri iyi yakanga yatanga hushe hweRoma. Roma yaive yatora Israeri muna 63 BC. Jurio Kesari paakagara pachigaro akaita Herode, aive asiri muJuda, Mambo wemaJuda nekuti baba vaHerode vaive vabatsira Kesari. Saka Roma yakaisa Herode pachinzvimbo chekuedza kuuraya Jesu paaive achiri mwana muduku wemakore anoda kuita maviri.
ZVAKAZARURWA 12:4 Rumhinda rwayo rukakweva chetatu chenyeredzi dzokudenga, ndokudzikandira pasi panyika; shato iyo ikamira pamberi pomukadzi wakanga ozvara, kuti iparadze mwana wake kana azvara.
“Rumhinda” (muswe muchirungu tale) rweshato muchiratidzo runomiririra “nyaya” (tale) yakaudzwa vanhu naSatani.
Chetatu hachisi chiverengo chevanhu. Mwari anoona nyika muzvikamu zvitatu. MaJuda, maSamaria (hafu maJuda hafu maHedeni), uye maHedeni.
Saka Mwari anoona maJuda sechetatu chevanhu muzvikamu zveboka raanovaisa, kwete mukuverengwa kwavo.
Vana vaAbrahama vanodaidzwa kuti nyeredzi. Mune mamwe mashoko, vanhu vechiJuda.
GENESISI 15:5 Akamubudisa panze, akati: Zvino tarira kudenga, uverenge nyeredzi, kana uchigona kudziverenga. Akati kwaari: Ndizvo zvichaita vana vako.
DANIERI 8:9 Zvino kunorumwe rwadzo kwakabuda runyanga ruduku, rwakazokura kwazvo, kumativi ezasi, nokumavirazuva, nokunyika yakaisvonaka.
10 Rukakura kusvika ikoko kuhondo dzokudenga, rukawisira pasi dzimwe hondo nenyeredzi, ndokutsika pamusoro pazvo.
Nyanga inokwanisa kumiririra simba renyika. Nyanga duku ndiko kanyika kaduku-duku panyika, Vatican. Iri panzvimbo yemakiromita mana kuipoteredza ine vanhu vasingasviki chiuru. Asi ndiyo musoro wekereke yeRoman Catholic kunodaidzwa vatsvene vakafa vonamatwa ikoko. Kunamata vakafa ndiko kupira midzimu. Tingati zvinoita sekuti vakabvisa munhu iyeye kuDenga nekuti midzimu haina nzvimbo kudenga. Vanoitira kereke dzavo zviumbwa kana mifananidzo yevatsvene saka izvi kwavari zvinodzosa vatsvene ava panyika.
Satani aishandisa vatungamiri vezvitendero kuti akurudzire maJuda vakagamuchira Jesu musi weSvondo yeMurara kuti vamuroverere musi weChishanu chakazotevera. Chefu iri muvatungamiri vaitaura nyaya kana nhau asi mubairo wakazosangana nevanhu vakanyengereka vakateerera vatungamiri vavo.
Muna AD 70, maJuda 1 100 000 vakaparara apo mukuru wemauto evaRoma Tito akaparadza Temberi neguta reJerusarema. MaJuda akadanidzira nemanzwi makuru pakufa kwaJesu mazita avo akadzimwa kubva muBhuku yeHupenyu kuDenga nekuti vaive vateerera nyaya yaSatani isimo muMagwaro.
ZVAKAZARURWA 12:5 Akazvara mwana womukomana, unozofudza marudzi ose netsvimbo yedare, mwana wake ndokutorwa kunaMwari, nokuchigaro chake chovushe.
Abrahama aive wemakore anenge 1900 BC. Kutanga kwerudzi rwemaJuda. Jesu paaive ane makore 33 aive ari muduku kwazvo kana zvichienzaniswa nerudzi rwemaJuda rwaive “mai” vake muzvikamu zvemadzitateguru enyama akamubereka.
Tsvimbo yedare inomiririra makore 1000 erugare mumashure meAmagedhoni. Zvivi hazvizopihwi mukana ikoko.
Saka maJuda akaparara makore 37 mumashure mekukwira kuDenga kwaJesu. Vakaparadzwa neimwe yehondo dzakashandisa hutsinye hwakanyanyisa kwazvo muna AD 70 apo Roma nevainodyidzana navo vakarwa nepavaigona napo kuti vabvise maJuda. Vanhu vanodairika miriyoni vakafa. Rudzi rwekufa kwevanhu vasina mhosva vakawanda kudai haruna kuzowanikwazve pamusoro peguta rimwechete kusvika patakazosvika pahondo yeStalingrad muhondo yepasi rese yechipiri vekuGermany payakarwisa Russia.
Mumashure megore 70 AD maJuda vakapandukira mubati Hadriani akazovaisa muhupoteri kubva kuJerusarema muna 135 AD. MaJuda akabva abva pachiso cheBhaibheri akazowanikwazve muhondo yepasi rese yechipiri mukuurayiwa kwakaipisisa kwavakaitwa muHorokasiti apo Hitira akauraya maJuda mamiriyoni matanhatu. Iyi yaive nguva duku yeKutambudzika. Uku kwaive kuratidzirwa kwenguva yeKutambudzika kukuru kuchazouya.
Parizvino Bhaibheri rinobatazve nyaya yemaJuda munguva yeKutambudzika kukuru.
ZVAKAZARURWA 12:6 Mukadzi akatizira kurenje, paakagadzirirwa nzvimbo naMwari, kuti vamuchengete’po mazuva anechuru chinamazana maviri namakumi matanhatu.
Mazuva 1260 kana kuti makore matatu nehafu ndiko kureba kuchange kwakaita nguva yeKutambudzika kukuru. Vakarambwa nemarudzi, Israeri inenge iri murenje rekurambwa panyika.
ZVAKAZARURWA 12:7 Zvino kurwa kwakava’po kudenga; Mikaere mavatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa inavatumwa vayo;
ZVAKAZARURWA 12:8 Vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga.
Kana kereke yakwira kudenga, Satani anokandirwa pasi kubva kuDenga kwaari nenzvimbo semuchuchisi kana kuti mupomeri wehama munaShe. Nguva yeKutambudzika inobva yatanga paanorwisa maJuda nevasikana vakapusa vemakereke vaive vasingazivi Magwaro.
Mweya Mutsvene unosiya nyika wokwira kuDenga neMwenga waKristu. Hupenyu hunobva Rufu rwotora nzvimbo panyika.
Mikaere ndiye Mutumwa mukuru ane izwi rinobereka kumuka kwevakafa.
JUDASI 1:9 Asi Mikaere, Mutumwa mukuru,
Saka paanodzinga Satani kubva kuDenga, Denga rinenge ranatswa uye Mikaere anenge akugona kuburuka kuzomutsa vatsvene vakafa.
Kristu anozvidaidza kuti Mikaere paanenge achibata basa ari Mutumwa mukuru.
63-0728 KRISTU NDIYE CHAKAVANZIKA CHAMWARI CHAKAZIVISWA
Chinhu chekutanga chakaitwa naRusifa kupatsanura kuwadzana kwaMwari nevanhu, aida kumuvakira hushe hwakabatana, humambo hukuru hunoita sehwazadzwa netsika, hushe hukuru kwakadarika hwaMikaere, hwaive naKristu.
55-0109E KUTANGA NEKUGUMA KWEMUGOVE WEVAHEDENI
“Uye panguva iyoyo Mikaere achamira, muchinda mukuru.” Mikaere aive Kristu, ndizvo chaizvo, Airwa hondo dzevatumwa kudenga naSatani.
ZVAKAZARURWA 12:14 Ipapo mukadzi akapiwa mapapiro maviri egondo guru, kuti abhururukire kurenje kunzvimbo yake, kwaanochengeterwa nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva, kwaasingavonekwi nenyoka.
Chikara chepakutanga chakashandurwa kuitwa nyoka pakupedzisira chinoita chiso kana musoro, Pope waantikristu wekupedzisira. Gondo, nekuona kwaro kunodakadza, mucherechedzo wakanaka wemuprofita. Mosesi naEria, mapapiro makuru maviri egondo, anochengetedza maJuda 144 000.
ZVAKAZARURWA 12:15 Ipapo nyoka yakaburitsa mvura mumuromo mayo, yakaita sorwizi shure kwomukadzi, kuti akukurwe norwizi.
Dutu revanhu nedzidziso
ZVAKAZARURWA 12:16 Ipapo nyika yakabatsira mukadzi , nyika ikashamisa muromo wayo, ikamedza rwizi rwakaburitswa neshato mumuromo mayo.
Maprofita maviri aive nesimba pamusoro penyika. Nyika inokwanisa kushamiswa ichimedza vavengi vavo.
Saka maprofita maviri, sevakuru vemauto vakurusa munhorondo yevanhu, vanoshandisa “chombo chemamiriro ezvinhu nekunze nenyika” nekukanganisa mamiriro ezvinhu nemhepo hurusa, kudengenyeka kwenyika, mafungu, madutu enhunzi kana mhashu, rima guru, maronda anorwadza nezvimwe zvakadaro, kuti zvibate nekudzivisa hondo dzakaipa dzaPope waantikristu. Zvino Pope anobva aenda kuti anoparadza maKristu akaponeswa vaive nehusimbe, vaizvitemba zvakanyanya, vasinehanya, uye vaive nenungo dzekunzvera nekutsvaga Magwaro kuti vawane chokwadi chakazara cheBhaibheri. Vaitamba “ndotevera mutungamiri wangu” vakabva vawira mugoronga renguva yeKutambudzika kukuru. Achiputsanyiwa nemaprofita maviri, Pope waantikristu anowana kutsiva kwake nekuuraya vanhu vemakereke vakapusa vaya vaive nemukana wekuponeswa nguva yeKutambudzika isati yakwana. Jesu anouya kuzotora Mwenga wake kubva ipapo anenge asisiri pachigaro chengoni. Ngoni nenyasha zvinenge zvaguma.
ZVAKAZARURWA 12:17 Zvino shato yakatsamwira mukadzi, ikaenda kundorwa navamwe vana vake, vanochengeta mirairo yaMwari, navanobata kupupura kwaJesu.
Vhesi ratabva pariri iri rinosanganisa vasikana vakapusa vakaponeswa vanopedzisira vauraiwa munguva yeKutambudzika kukuru.
Mukadzi anocheka nguvo yake yemuchato kubva pajira guru. Chero jira rinenge risina kuenderana nepeteni yake, rinenge richiri jira rakanaka asi rinoraswa sejira rasaririra. Saka vasikana vakapusa vachapedzisira vapinda munguva yeKutambudzika. Vaive machira akanaka, maKristu akaponeswa. Asi vaive vasingaenderani nechidimbu chepeteni yeMagwaro nekuti vaifara kushandura Bhaibheri reKing James vhezheni kuriita rechimanje-manje. Vaive vachigutsikana nekurwisa Magwaro pavaida zvavo vachifuratira mamwe Magwaro vachiti haana kukosha. Magwaro paaive akanyarara muzvikamu zveKutinhira kunomwe, vaive nemufaro mukuru kugadzira dzidziso dzavo dzekutsananguva zvinhu zvisingazivikanwi. Saka havakwani mupeteni yeShoko raMwari. Mwari anobva avarasa sevakasaririra, vanhu vakanaka nekuti vaive vakaponeswa, asi vaive vasina nzvimbo muhurongwa uye peteni yaMwari nekuti vaive vasina shungu dzekunzwisisa Shoko raMwari.
Zvino tinokwanisa kudzokera kuChitsauko 12 kuti tione kuti inotitsanangurira sei nhorondo yekereke.
Mazuva 1260 anoshanda sei nekereke?
Zuva rimwe rinokwanisa kumiririra gore muchiprofita.
Rabani akati kuna Jakobo:
GENESISI 29:27 Zadzisa pedzisa vhiki yewaniso naiyeyi, tigokupa mumwe vo pamusoro pebasa rauchandibatira mamwe makore manomwe zve.
Mwedzi wechiJuda waive nemazuva makumi matatu.
ZVAKAZARURWA 11:2 Asi siya ruvazhe ruri kunze kwetembere, usaruyera; nokuti rwakapiwa vahedeni; vachatsika guta dzvene mwedzi inamakumi mana nemiviri.
3 Ndicharaira zvapupu zvangu zviviri kuti zviprofite, zvakapfeka masaga, mazuva anechuru chinamazana maviri namakumi matanhatu.
Kana mazuva 1260 achiburitsa mwedzi makumi mana nemiviri mwedzi mumwe nemumwe unenge urinemazuva makumi matatu.
Mwedzi gumi nemiviri yemaJuda inoita kuti gore ravo rive 12 x 30 kunobuda mazuva 360.
Saka gore redu remaHedeni remazuva 365, 25 rakareba nemazuva mashanu nekota kudarika gore remaJuda.
Zvinoreva kuti makore 70 edu isu anozoita 5,25 x 70 = mazuva 367 rinozoita rimwe gore rechiJuda. Saka makore edu 70 (kureba kwegore redu kwakagadzirwa neJurio Kesari) akaenzana nemakore 71 echiJuda.
Ndicho chakavanzika chekunzwisisa maprofita.
Mukadzi (kereke) akatizira murenje kuti apunyuke pakuuraiwa kwemakore 1 260.
Saka kutambudzwa kwakatanga rini?
378 ndiro raive gore rakakosha. Kekutanga maHani (vakatungamirira kuparara kwehushe hweRoma zvakazotugamirira kusimuka kwaPope pakuva nesimba) vaive chikamu chemauto echiGothi akauraya mubati Valens nevazhinji vemauto ake pahondo yeAdrianople. Theodosius akabva aitwa mubati. Pakufa kwake akapatsanura hushe muzvikamu zviviri achigovanisa vanakomana vake vaviri. Izvi zvaimiririrwa nemakumbo maviri edare pachiratidzo chaDanieri chemufananidzo wemuHedeni. Ndiye akaita mubati wekutanga kuramba chinzvimbo chaPontif kana kuti Pontifex Maximus chaive chagamuchirwa naJurio Kesari muna 63 BC. Izvi zvakamuita muprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi. Chinzvimbo ichi chakazotorwa nabishopu weRoma achiri kudaidzwa kuti Pontif. Saka zvakavanzika zveBabironi zvakapinda mukereke yeRoman Catholic kuti zviyiite Babironi yakavanzika. Theodosius akabva atendera dzidziso yeTiriniti sechokwadi chakazara achibva atanga kurwadzisa nekuuraya vese vaisatenderana neTiriniti. Pakupedzisira, akabva azotenderana nekutonga kwekereke yeRoman Catholic pamusoro pevabati venyika.
Nhandare yaive yateyiwa. Bhishopu weRoma aive akugona kudaidza vabati venyika kuti vauraye vese vaisatenderana nekereke yeRoman Catholic. Simba rezvematongerwo enyika raive nevabati raive rakukwanisa kushandiswa nekereke.
MaKrustu aive akufanira kupararira kuenda kunzvimbo dzakasaririra kana vaida kuva vakachengetedzeka.
Makumi emamiriyoni evanhu akaraiwa kusvika panguva yakazoita kunge kuuraiwa kwevanhu kwamira munana 1700.
Muenzaniso wakanakisa “wekereke iri murenje” vaive vechiWalsense. Vakatizira kunhivi dzeAlps kwavaisvikira pakufa nekuoma nechando. Zvisinei, vakapararira nenzvimbo dzakasaririra idzi vakapunyuka kubva kumauto ekereke yeRoman Catholic vaiedza zvikuru kuvauraya.
Kubva mumakore ana 1150 maHedeni aitenda echiWaldnsia vakachengetedzeka muNguva dzeRima munhivi dzemakomo eAlps. Rwizi rweRhine nerwizi rweRhone dzinoratidzwa mumufananidzo uri pano. Vakagona kupararira munzvimbo dzeAlp kubva ipapo vakapinda munyika dzaive dzakapoteredza kuti vaparidze Evangeri. Kushingirira kwavo nekuomerwa kwavakasangana nako kwaive kukuru kwazvo. Pakatanga Mutsiridzo muna 1520 vakabva vakwanisa kuwana nzvimbo dzekugara dzaive dzakachengetedzeka kubva kuchiRoman Catholic.
Pakupedzisira madzibaba echiPlgirimi akapunyuka achienda mhiri kwemakungwa muna 1620 vachienda kuAmerica kunotsvaga nzvimbo yakachengetedzeka kubva pakuuraya kwechiCatholic.vakasvika kuMassachusett pane donhwe dzvuku kumusoro kwemepu iri pamusoro apa.
Vaida rusununguko munezvezvitendero. Kereke isina Pope. Nyika isina mambo.
Kubva mugore 378 kusvika 1620 pane makore 1242 evaHedeni.
Asi makore 70 ega ega maJuda aiwana gore pamusoro. Saka mukagovanisa 1242 na 70 munowana 17 nemakota matatu zvinoda kusvitsa pamakore 18.
18 + 1242 = makore 1260 echiJuda.
Saka zviprofita zveBhaibheri zvinoitwa nemakore echiJuda.
Pakupedzisira kereke yaive yachengetedzeka kubva pakuuraya kwechiCatholic. Kutenda kwaiitwa kuBhaibheri nevakapanduka kubva muRoma uye kuvimbika kwavo pakushanda kwavo kwaizoshandura renje iri kuriita nyika yakasimbisisa yaive isati yamboonekwa panyika.
VekuSpain vakapamba Mexico neSouth America makore akapoteredza 1500. vakauya nechirwere chemhezi chaisakwaisa kurwiswa nemaIndia ekuAmerica. MaIndia ekuAmerica akafa vari makumi emamiriyoni saka nekudaro North America yakabva yaita renje guru kwazvo raive nevanhu vashoma vaigaramo zvichienzaniswa nevanhu vazhinji vaigara muEurope.
Zviitiko izvi zvakatungamirira kusimuka kweAmerica kubva panyika 13 dzaive mumubatanidzwa wayo dzekutanga kuiita simba guru rechimanje-manje rakatangwa mumashure mehondo yepasi rese yechipiri. America yakabva yadzivirirawo Israeri payakadzoserwa nyika yayo yechipikirwa. Mutungamiri wenyika Truman muna 1948 aive mutungamiri wenyika wekutanga kuita Israeri nyika yakazvimiririra. Mutumgamiri wenyika Nixon akabatsira Israeri kubva pakurwiswa nemaArabu pazuva ravo dzvene reYom Kippur muna 1973. Kupa kwakaita America ndege zhinji kuIsraeri kwakatendera maJuda kuti vadzosere vakurire maArabu. Israeri yakakurira matangi evaSiria munzvimbo dzeGorani zvaidadisa zvekuti vekuAmerica vakadzidza kuita kwavo vakashanduka kutanga kushandisa mabhomba anodaidzwa kuti masimati bhomba nemamiziri pachinzvimbo chemabhomba makuru. Izvi zvakabva zvashandura nzira dzekurwa nadzo dzemazuva ano zvakazara.
Mutumgamiri wenyika Trump akazivisa muna 2017 kuti aizoendesa embasi yeAmerica kuJerusarema. Vatungamiri venyika vaive vadarika vaitya kwazvo kuita izvi, kusanganisira mutungamiri wenyika akabva Obama akaita sarudzo achipikisana neIsraeri asati abva pachinzvimbo. Vemubatanidzwa wenyika dzepasi rese (UN) vakakunda pasarudzo nezvibodzwa 28 ku 9 vachikwikwidza nerutivi rwaive naTrump. Asi iye akangofuratira sarudzo yavo. Trump munhu akashinga zvinodakadza pakuita zvinoita sezvisingagoneki. Asi America nesimba rehondo rakanakisa kukunda dzimwe nyika dzese nemauto akasimbisisa, yakavakira murenje rakambotizirwa nemadzibaba emaPilgrimi, izvozvi yava kutsigira Israeri zvakazara. Mukuru wemauto Mattis mukuru wemauto akanakisa. Komanda mukuru Trump ndiye mushingi wevashingi vose.
Truman (T) Nixon (N) Trump) T. TNT. Kuputika pamweya. Kudzoka kwemaJuda kuIsraeri kuzozadzisa zvakaprofitwa makore anodarika 2 000 akadarika. Nyika haisati yamboona zvakadai kubva kare.
United States ye America inodaidzwa kuti USA.
Tarisai izwi rekuti Jerusarema. Munoona here JerUSArema. USA iri pakati peJerusarema.
Mwari aiziva pamusoro pekuti America yaizochengetedza Israeri kare muTestamente Yekare pakapiwa zita iri kuguta guru raDavidi.
Nyeredzi yaDavidi ndiyo chiratidzo cheIsraeri pamureza wayo. Zita rakurisa rinoyanana nemureza wenyika.
Asi mune chakavanzika here munyeredzi inonongedza mativi matanhatu iyi?
Mosesi akatungamirira eksodo kana rwendo rwekutanga rwemaJuda achibuda muEgipita. Zvino Vatongi vachibva vavatonga. Madzimambo achibva aedza kuvatonga. Kurairwa kwakanaka kwavakawana, kwavaimbofuratira, kwaibva kumaprofita. Kuchibva kwazouya Messiasi akarurama. Vachibva vamuuraya zviri nyore. Izvi zvakavatungamirira kumakore 2000 avo ekupararira nenyika dzese dzepasi rese. Izvozvi vakudzoka kunyika yeChipikirwa, asi hakuna nzvimbo yechikamu chechinomwe. Saka anofanira kuva Mosesi anovamirira munguva yeKutambudzika kukuru. Zano raMwari ragara riri rekudzokera pakatangira zvinhu.
Nguva yekereke yechinomwe inofanira kudzokera kuBhaibheri pakutenda kwekereke yekutanga kana tichida kutevera nzira iri nyore iyi.
Mwenga anowanana naJesu. Anoda ringi yemuchato inova denderedzwa redare nekuti denderedzwa rinogumira paratangira izvi zvinomiririra hupenyu husingagumi. Hapana mavambo, hapana magumo.
Asi ngwarirai sezvo uku kuri kushanduka kwenguva. Apo Mwari anotendeukira kuIsraeri achibva kukereke yemaHedeni.
Zvino Evangeri rinodzokera kuvaIsraeri munguva yeKutambudzika kukuru apo maKristu mazhinji akaponeswa vasingapisi kana kutonhora pakutevera Magwaro mune zvese zvavanotenda mazviri, vanotsvagwa vachiuraiwa.
Munguva yeKutambudzika kukuru munotora chiratidzo chechikara (kusukwa njere kwemasangano nedzidziso isimo muMagwaro) kana kufa.
Vasikana vakangwara vanoenda kumutambo wewanano kunodya. Vasikana vakapusa vanoenda kuchikara kunodyiwa.
ZVAKAZARURWA 13:15 Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chiraire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vavurawe.
16 Chinomanikidza vose,vaduku navakuru, vafumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruvoko rwavo rworudyi, kana pahuma yavo.
Pahuma dzenyu pane njere dzenyu dzamunofunga nadzo. Kana ndangariro dzenyu dzikatanga kutongwa nevatungamiri vemakereke venyu zvino ruvoko rwenyu rwerudyi, runomiririrwa nemabasa eyu, runenge ruchitongwa nekereke yenyu. Munenge musingazogoni kuzvifungira.
Nenzira imwechete maJuda akagamuchira Kristu musi weSvondo yemurara ndivo vakakurudzirwa nevatungamiri vavo vezvitendero kumuvuraya musi weChishanu chakatevera.
ZVAKAZARURWA 13:1 Zvino ndakavona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chinenyanga dzinegumi nemisoro minomwe; napamusoro penyanga dzacho, pakanga panekorona dzinegumi napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari.
NGUVA YEKEREKE YESIMIRNA- BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO 4
Chikara pachakasimuka paKanzuru yeNicaea, saka mufananidzo unosimuka kubva pakanzuru yemakereke epanyika nemasimba ese asiri ekunamata echisatani kuti adenhe kutsamwa kwaSatani pamusoro pemuzambiringa waMwari wechokwadi. Kuchava kudzokororwa kwekuita kwese kwadiabhorosi nekunyengera nemano nehutsinye.
Pakanzuru yeNicaea muna 325 AD mubati weRoma akaita Bhishopu weRoma nesimba munezvematongerwo enyika uye zvechitendero muRoma. Constantine pachake aitama kuenda kuConstantinople. Akapawo mari zhinji kuna bhishopu weRoma. Dzidziso yeTiriniti yakamanikidzirwa kupfurikidza kanzuru iyi kuti ive dzidziso iri pamutemo yekereke yeRoman Catholic.
Chitsauko ichi chinoshanda nekusimuka kwekereke yeCatholic pakutonga pasi rese.
Uku hakusi kusimuka kweEurope sehushe hweRoma hwechipiri kunotonga pasi rese.
Kumuka kweRoma ndiko kusimuka kwekereke yeRoman Catholic sekereke uye simba munezvemari kuti itonge nyika. Basa ravo sesangano rinotungamirira munezvechitendero kwaive kukurudzira vakabuda mairi vemasangano kuramba Shoko rakanyorwa muBhaibheri vachikoshesa nekusimudzira mazano evanhu netsika dzechipegani.
Kisimusi neTiriniti mazwi asimo muBhaibheri ese akabva pachipegani. Tisingatauri maisita egi nemaisita rabiti. Maachibhishopu. Makadhinari. MaPope. NaPontif.
Mwari haana Zita sezvo achidaidzwa nemazita matatu ezvinzvimbo zvake. MuZita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Zita racho nderekutii? Pasina anoziva, kereke yakasimba mudenderedzwa rmwechete nesangano reRoman Catholic.
Kesari weRoma yechipegani aitonga kubva pachikomo chemutsetse mukuru muRoma. Temberi yeJupita yaive pachikomo chemutsetse mukuru ndiyo yaive nzvimbo yemusoro wezvese zvavaipemberera kana gurukota rehushe hweRoma.
Mufananidzo unoratidza zvikomo zvinomwe zvekutanga zvaive zvakavakirwa Roma kuItaly.
VanaKesari vakabviswa nerudzi rwevatorwa rwaive pasi paOdoacer simba ravo ravaive naro pasi rese rikaparadzwa. Chikomo chepamutsetse mukuru chakarasikirwa nesimba racho rese uye kutonga kwacho. Zvino Pope akabva asimuka kuva nesimba zvishoma nezvishoma kubva pamuzinda weLateran waive pachikomo cheCaelia. Ndiko kuchiri kugara Pope nazvino. Pope ndiye ave mutungamiri wechitendero ane kurudziro huru munezvechitendero uye zvematongerwo enyika pasi rese. Kuungana kwakaita vatungamiri vedzinyika kukuru kwaive parufu rwaPope John Paul 2. Ronda rinovuraya raive raporeswa. Simba raive rarasikirwa naKesari raive radzoswa naPope asi iye aine simba pasi rese. MaRoma echipegani aitora nyika asi nyika yavo payakakurisa vakapererwa nemari vachishandisa mari kuedza kudzivirira kutorwa kwenzvimbo dzavo. Kereke yeRoma yakangwara. Inopamba pfungwa dzevanhu yoita kuti vatendi vayo vape mari kukereke nenzira iyi yakapararira kunyika dzese ichipfuma kwazvo mukuita izvi.
Zvikomo zvinomwe zveRoma.
Izvi zvinotsanangura chakavanzika chechikara chine misoro minomwe. Misoro minomwe inomiririra zvikomo zvinomwe zveguta reRoma rekutanga. Romulusi nevamwe vake vakavakira pamusoro pezvikomo kuti vachengetedzeke. Zvikomo zvinomwe pazvakazara nezvivakwa vakavaka rusvingo rwekuchengetedza guta (mutsetse mutsvuku). Kana rusvingo rukavakwa rwakapoteredza nzvimbo inogara vanhu yaibva yadaidzwa kuti guta. Saka Roma yakabva yazivikanwa nekunzi guta reZvikomo Zvinomwe.
Gungwa rinomiririra marudzi asina kugadzikika eEurope mukati mawo ndimo makasimuka kereke yeRoma kuva nesimba.
Chikara chaive nemisoro minomwe chinomiririra kumuka kwehushe hweRoma hwava kereke uye simba munezvemari. Kereke yeRoma yakakura kudarika mamwe masangano ese chero akabatanidzwa pamwechete. Pope anotaurwa nezvake zvakanyanya munhau dzepasi rese kudarika vamwe vatungamiri vose vezvitendero.
63-0319 CHISIMBISO CHECHIPIRI
Russia haitonge zvese; hatitongi zvese. Kuna mambo mumwechete chete anotonga zvese... saizvozvo dare raNebuchadnezzari rinofamba mune zvese nezvigunwe, ndiyo Roma.
Roma haizviite senyika asi sekereke.
Europe haisi rumuko rwehushe hweRoma.
Roma inoda kutonga pasi rese. Nzira imwechete inogona kuitwa izvi neRoma kuva kereke ine hunyengeri mune zvechitendero (bhiza jena) uye sesimba munezvematongerwo enyika (bhiza dzvuku) zvakare sesimba munezvemari (bhiza dema). Nhasi mabhiza matatu aya akabatanidzwa, akamirira mutasvi wawo anonzi Rufu.
Hakuna nyika inokwanisa kutonga pasi rese nekuzvitorera nzvimbo dzenyika. England ine ngarava zhinji kudarika dzimwe nyika dzese chero dzikaiswa pamwechete zvakaita kuti vagone kutora kota yepasi rese mumazuva ehushe hwavo asi hondo yepasi rese yechipiri yakavasiya vasina mari hushe hwavo hukaparara.
Makomunisiti akasimuka kuva nesimba mumashure mehondo yepasi rese yekutanga vakatonga chikamu chimwe muzvitatu zvepasi rese Russia isati yapererwa nemari. Vachiri nesimba asi mari yavo yakaisirwa muganhu.
China yaive yakangwara zvakanyanya ikatora hurumende yemakomunisiti nemamiriro ehupfumi aiita nezvekuunganidza mari vakaita simba kwazvo. Havasi kuedza kuzvitorera nzvimbo dzenyika dzakawanda asi vari kushandawo sesimba munezvemari kuti vave nesimba uye nekubata pamusoro pedzimwe nyika.
Roma yaidzidza. Kutora nzvimbo dzenyika kwaiita kuti vaburitse mari zvakanyanya uye hupikisi hwaiwanda. Asi sekereke, Pope aikwanisa kutonga njere dzevanhu yova simba guru munezvemari sezvo vatendi vanoisa mari dzavo kukereke kuti vabatire nzvimbo dzavo kudenga. Nekuzviti iye akatsiva mutsvene Petro akapihwa makiyi eDenga, Pope anozviwanira vateveri vakawandisa vanoda kuenda kuDenga.
Tarirai kuti Petro ane maKiyi ekuzarura Mukova akuonekwa seakakosha kudarika Jesu anova Mukova. Uku kutadza kukuru.
ZVAKAZARURWA 13:4 Vakanamata shato, nokuti yakapa chikara masimba; vakanamata chikara, vachiti: Ndianiko wakafanana nechikara? Ndiyaniko unogona kurwa nacho?
Satani anotonga zvematongerwo enyika. Saka Satani akakudza kusimuka kwaPope kuti aite simba rezvematongerwo enyika. Jesu akaramba simba munezvematongerwo enyika paakaripihwa naSatani.
“Ndiyani angagona kurwa naPope?” Hapana.
Makomunisiti vakaedza kuparadza kereke yeRoman Catholic kuPoland asi Pope wekuPoland Pope John 2 akashanda basa guru pakuparadza komunisimu muPoland zvakaita kuti Russia irasikirwe nekubata kwayo pamusoro peEurope yekumabvazuva pakawira pasi comunisimu. Saka vatongi venyika dzepasi rese vanoremekedza Pope. Ane vatendi veCatholic vanodarika mazana gumi nemaviri emamiriyoni pasi rese vanomutsigira. Vatendi veRoman Catholic vari munyika dzese uye vanozopikisa chero pfungwa yevanoda kurwisa Pope. Vatican yakatsigira Hitira nemaNazi asi vakasiiwa vakadari pasina kutongwa nekuti vanhu vese vaitya kupomera Pope . Ndiko kuita kwekurudziro yake pamusoro pevanhu vanodarika mamiriyoni vanotenda kuchiCatholic vakapararira nepasi rese.
ZVAKAZARURWA 13:5 Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvokumhura; chikapiwa Simba rekuti chizviite mwedzi inamakumi mana nemiviri.
Idzidziso shoma kwazvo dzeRoman Catholic dzinobva muMagwaro. Kuripira mhosva dzevakafa kwaitengeswa apo maCatholic vairegererwa zvivi kana vakaripira mari. Pope aive nesimba rekusunungura mweya kubva munzvimbo yavanoti pugatori kana munhu achiri kurarama akaripira mari pachinzvimbo chehama yake yakafa kukereke yeCatholic. Pope Francis akapa maprista mvumo yekuregerera vakadzi vanobvisa mimba. Pope nekuzviita ane simba rekuregerera zvivi, akuzviisa panzvimbo yaMwari.
Mwedzi makumi mana nemiviri makore matatu nehafu. Uku ndiko kureba kwakaita nguva yeKutambudzika kukuru. Ndipo pachatonga Pope wekupedzisira pasi rese. Ngwarirai pachatora Pope zita rekuti Petro 2.
Akatanga Roma ainzi Romulusi. Mubati wekutanga ainzi Augusto. Mubati wekupedzisira ainzi Romulusi Augusto. Neimwe nzira maRoma akagona kuita kuti munhu wekupedzisira ave nezita rakaita seremunhu wekutanga. Ndiyo vhezheni yavo “yewekutanga nowekupedzisira” pavanoedza kuteedzera chinzvimbo chaJesu.
Petro ndiye aive Pope wavo wekutanga. Sekutaura kwavanoita. Zvisinei nekuti kutaura uku kunyepa nekuti bhishopu weRoma akatanga kuzvidaidza kuti Pope makore akapoteredza 400 AD. Mazana emakore mumashure mekufa kwaPetro.
Saka Petro 2 richava zita rakakodzera kuna Pope wavo wekupedzisira.
ZVAKAZARURWA 13:6 Chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari, nokumhura Zita rake neTabernakeri yake naivo vanogara kudenga.
63-03 21 CHISIMBISO CHECHINA
Chakazarura muromo wacho kuti chimhure Mwari, kuti chimhure zita rake, .... (kuchipa chinzvimbo)... tabernakeri yake... (inova nzvimbo inogara Mweya Mutsvene, kuiita nzvimbo muRoma, guta remuVatican; munokwanisa kuramba muchienderera mberi muchidzika)... uye neavo vanogara kudenga [vatsvene]. (Kuvamhura nekutaura kuti vaive vatadzi) ...
Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene” harisi zita. Mutsetse wezvinzvimbo. Asi ndiyo nzira yakashandiswa nekereke yeRoma kubvisa zita raMwari vachibva vakurudzira vemasangano akabuda mairi kutevera muenzaniso wavo.
Munamato wavo kuna Maria nevamwe vatsvene vakafa ndeimwe nzira yekunamata vakafa kana kupira midzimu.
ZVAKAZARURWA 13:7 Chikapiwa masimba vo kuti chirwe navatsvene, nokuvakunda, chikapiwa masimba vo pamusoro pamarudzi ose, navanhu vose, nendimi dzose, nendudzi dzose.
Rakapiwa kwaari kuti arwe nevatsvene ... (akaita saizvozvo).. uye kuti avakunde:... (akaita saizvozvo: akavapisa akavaita nyama yeshumba nekuvauraya neipi nzira yaaigona nayo.) simba rikapiwa kwaari pamusoro pemarudzi ese, ... ndimi dzose, nendudzi dzose.
Hazvina kubvira zvava saizvozvo muhushe hweRoma kusvikira Roma yechipegani yashandurwa kuitwa Roma yechipope simba reCatholic rikapararira pasi rese; ikaita kereke yeCatholic yepasi rese.
Makumi emamiriyoni akauraiwa nekereke yeRoma kusvikira nekuda kwetsitsi makore akapoteredza 1700 tsika yakaipa iyi yakamira.
Asi chikara chechipiri kana kuti simba chakasimuka kubva panyika. Gungwa rinomiririra nyika dzekuEurope dzine vanhu vazhinji kwazvo.
Nyika inomiririra nzvimbo dzeAmerica dzine vanhu vashoma. Vanhu vekuSpain vakaunza cherwere chemhezi nezvimwe zvirwere kuSouth America. MaIndia aiveko aive asingakwanisi kurwisa hurwere uhu mumiviri yavo vakafa nemakumi emamiriyoni avo. Madzibaba emaPilgrimi paakasvika paPlymouth Rock muMassachusett muna 1620, kuti vapunyuke kuuraiwa muEurope kwaive kusisina vanhu vechiIndia vakawanda munzvimbo iyoyo.
Vanhu vakapanduka vakabuda muCatholic ava vaida nyika isina mambo uye kereke isina Pope. Vaida rusununguko rwezvechitendero uye rwekutaura. (Nyanga mbiri dzegwaiana). Kongiresi yaikwanisa kupfiga nzvimbo dzemazambuko kwete miromo yevanhu. Vanhu vakaita mukurumbira kwazvo vakaita saWashington naLincoln ndivo vaive vatungamiriri vavo vekutanga. Asi nekukura kwakaita nyika iyi pamasimba kunamata kwakazarura nzira kunezvematongerwo enyika zvesimba uye kusavimbika nerudo rwakaipa rwemari.
ZVAKAZARURWA 13:11 Zvino ndakavona chimwe chikara chichikwira, chichibva panyika; chakanga chine nyanga mbiri segwaiana, chikataura seshato.
Kereke yakatanga kusanganisirwa munezvematongerwo enyika. Kudururwa kwePentecositi mu312 mumugwagwa weAzuza kuLos Angeles mugore 1906 kwakazoita mabato emakereke akarongwa nevanhu negore 1917. mharidzo yenguva yekupedzisira yaWilliam Branham yaivepo kutidzidzisa kuti todzokera sei kuBhaibheri nekutenda kwekereke yeTestamente Itsva, kwakazopatsanuka kuita masangano akawandisa kunge chivoni-voni chakatsemuka sezvo mapasita aisarudza kuturikira zvaaitaura kuti zvienderane nemifungo yavo murudo rwavo rukuru rwekuitwa vakangwara. Vangadai vakashandisa zvaakataura kubatanidza mavhesi eBhaibheri pamwechete kuti vagadzire dzidziso inobva muMagwaro.
ZVAKAZARURWA 13:12 Chinobata namasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho. Chinomanikidza nyika nevagere mukati mayo kuti vanamate chikara chokutanga, chiya chakapora vanga rokuvuraya racho.
America ine simba remari rekutsigira zvitendero zvemasangano pasi rese. Tsvagurudzo yakaitwa inoburitsa kuti kune vashumiri vanotongoita basa rehushumiri chete kuAmerica vakawandisa kudarika vari dzimwe nyika dzese vakabatanidzwa. Makereke ekuAmerica ndiwo anoparidza dzidziso yeTiriniti nekuiparadzira pasi rese (vakateedzera kuCatholic), mhemberero dzeKisimusi (dzakatevedzerwa kubva kumaCathlic), kuita pasita anotungamirira kereke (zvakatevedzerwa kubva pamuenzaniso weCatholic wekuita muprista pamusoro pekereke), kusanganisirwa munezvematongerwo enyika (zvakatevedzerwa parudo rwezvematongerwo enyika rune kereke yeCatholic), kusagona kutsanangura kuti chivi chekutanga chaive chii nekuti vanoti apura kana kuti muchero ndiwo wakadyiwa (zvakatevedzerwa kubva kuCatholic). Muchero uyu unokwanisa chete kuva mucherechedzo kwete muchero chaiwo unobatika nekuti Mwari akati miti yese yemichero yaive yakanakira kudyiwa pazuva rechitatu. Jesu achibva ati hakuna unoipiswa nechaanodya. Saka muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa waive usiri muti watinoona.
GENESISI 1:12 Nyika ikameresa vuswa, nemirivo inobereka mbeu dzinamarudzi adzo, nemiti inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo, inamarudzi ayo; Mwari akavona kuti zvakanaka.
13 Madeko akava’po, namangwanani akava’po, zuva retatu.
MATEO 15:11 Izvo zvinopinda mumuromo, hazvisvibisi munhu, asi zvinobuda mumuromo, ndizvo zvinosvibisa munhu.
Michero yese yakanaka uye hapana chekudya chinosvibisa munhu. Saka kereke yeCatholic nemakereke ekuAmerica anoitevedzera, havagoni kutsanangura kuti nei Eva akadya muchero akarangwa nekurwadziwa pakuzvara vana. Havagoni zvakare kutsanangura kuti nei Mwari asina kuudza Adamu naEva kuti vatendeuke. Saka makereke anoramba ari mukusaziva kukuru kwekuti chivi chekutanga chaimbova chii. Uye vanogutsikana kwazvo nekurarama mukusaziva kwavo.
ZVAKAZARURWA 13:13 Chinoita zviratidzo zvikuru, zvokuti chinoburusira moto unobva kudenga panyika pamberi pavanhu.
13 chiverengo cheAmerica sezvo yakatanga nenyika 13. Saka 13:13 ndicho chinhu chakakosha kuAmerica. Sainzi netekinoroji ndizvo zvinhu zvinogonekwa kwazvo neAmerica.
Zviratidzo zvikuru zvesainzi. America ndiyo yakaputitsa bhomba rekutanga reatomi paguta reHiroshima pachinhambwe chemamita 700. bhora remoto rakadonha kunoparadza guta raive pasi paro. Chigadzirwa chikuru chesainzi chaive zvese nehutsinye hukurusa husina kufanira vanhu uyewo chikagumisa hondo chikararamisa mweya yevanhu vazhinji. Yedu inguva yerima chaiyo. Muti weruzivo rwesainzi une midzi ine chefu. Zvigadzirwa zvinogadzirwa nevanhu zviri nyore kuwanikwa kuipa kwazvo. Semapiritsi nemishonga inoporesa inewo rutivi rwekukuvadza mairi.
Vanhu vekuAmerica vaive vekutanga (uye kusvika mugore ra 2017 vaive ivo vega vanhu ) vaive vasvika kumwedzi. Muchina wekuchadenga wakadzoka nekumhanya kwemakiromita 40 000 paawa rimwechete wakatsva kwemaminetsi matatu nehafu uchiuya panyika sebhora remoto uchibva muchadenga. Uyu waive moto waidonhera panyika zviri pachena kusvikira muchina uyu watanga kudzika zvishoma nezvishoma panyika mumhepo ine hunyoro, maparachuti akazokwanisa kuvhurika.
Hukuru hweAmerica munezvesainzi hunoremekedzwa pasi rese. Kunyanya kubva pavakakunda makwikwi ezvemuchadenga vachienda kumwedzi.
ZVAKAZARURWA 13:14 Chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara; chichiti kunavanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo , chiya chakanga chine vanga romunondo chikararama.
Zviratidzo zvinoitwa nemakereke ekuAmerica nhasi ndiko kushandisa simba remapato emakereke nemari zhinji kubatanidza masangano akabuda muchiCatholic kuti aite mufananidzo kana chiratidzo chesangano reCatholic.
Dzidziso dzeBhaibheri dziri kubviswa zvishoma nezvishoma mumakereke. Mumhanzi wemadhisiko panguva yekurumbidza nekunamata yava nembiri. Rudo nekuwadzana ndizvo zviri kukosheswa. Zvitendero zveBhaibheri zvava “zvazuro”. Hazvichakosheswa.
Makereke eEvhangeri vanokoshesa ruponeso nekurarama hupenyu hwakanaka, hwakachena. Izvi zvakanakira ivo. Vamwe vanokoshesa kutaura rurimi rusingazivikanwe. Mumashure maizvozvo ingori “huyai kukereke nguva dzese munokunda”. Nekupera kweruzivo rweBhaibheri, kunobva kwaita zvinhu zvishoma kwazvo zvinoparadzanisa makereke. Mapasita ndivo vanofunga zvese, vanhu vangoripo pakuteerera nekutevera. Kana vanhu vasina ruzivo rweBhaibheri vanobva kumakereke akasiyana siyana vakasangana vanobvumirana zviri nyore pazvinhu zvishoma zviri nyore muBhaibheri zvavanenge (nenyasha) vachiri kuziva.
Dzidziso iri kudukupiswa. “Chii chinhu chiduku chatinofanira kuziva?” Ndiyo inoita mhinduro yakachenjera.
VeRoman Catholic, kuti vafuratire zviprofita zvakataurwa pamusoro pavo, vakaisa zvese zvakaprofitwa kumberi munguva yeKutambudzika kukuru. Vemasangano akabuda mairi vakangotevedzerawo izvozvo . Mukateerera vachiparidza munoona kuti makore 2000 enhorondo yekereke akabviswa muBhuku raZvakazarurwa sezvo zvese zvarinotaura zvakaiswa kumberi munguva yeKutambudzika kukuru. Hapana zvakawanda zvekupokana nazvo ipapo nekuti Mwenga achange asiri munguva yeKutambudzika saka kwavari zvine basa rei kuti zvakaprofitwa ndizvo here kana kuti hazvisi.
Saka zvese zvakaprofitwa muBhuku raZvakazarurwa zvichave zvichiudza vasikana vakapusa kuti chii chichaitika kana vamunguva yeKutambudzika kukuru. Hakuna zvakaprofitwa kuti zvibatsire vasikana vakangwara kuti vanzwisise nguva dzemakereke. Zvakaoma. Saka chinovaita kuti vangware chii.
Vese vemasangano akabuda muchiCatholic vakutenda kuti nguva yeKutambudzika kukuru ndeyemakore manomwe, maJuda achavaka zvakare Tembere munguva yeKutambudzika, mutungamiri wemubatanidzwa wenyika dzekuEurope ari ndiye chikara chekupedzisira, chibvumirano cherunyararo pakati peParesitina (vasina nyika inonzi yavo kubva gore ra 1967) neIsraeri iri ndiyo inenge yakatariswa zvakanyanya nekuprofita kweBhaibheri.
Hapana kana chimwe chezvinhu izvi chinotsigirwa neBhaibheri, tichitsvaga vhesi nevhesi.
Zvese hazvina zvazvinoreva kana takutsvaga pazvinobva.
Saka vemasangano vakabuda muchiCatholic vanotenda izvi ndivo vanhu “vanoziva” vanotambisa nguva yavo mukusaziva vachivaka tsananguro dzinoyevedza asi dzisina zvadzinoreva mukutaura uku. Asi kana mukangotambira kumwe kutaura kwavo, munenge mungori muchikwata chimwechete navo vese. Hukama hwekutadza hunobatanidza vanhu pamwechete.
Kereke inoda kuva nesimba munezvematongerwo enyika. Mari ndiyo ropa rehupenyu mune mapato chero api zvawo. America ndiyo yega ine mari inokwana kuita bato remasangano epasi rese rinenge richipikisana neRoma muzita raro asi richitenda zvakafanana nezvinotendwa neRoman Catholic. Kereke yepasi rese yakasangana masangano ese anopikisa chiCatholic asi iine mufananidzo wekereke yeRoman Catholic chaiyo. Tiri kurarama munguva yekufamba mumumvuri wemasangano kwete muChiedza cheShoko.
ZVAKAZARURWA 13:16 Chinomanikidza vose,vaduku navakuru, vafumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruvoko rwavo rworudyi, kana pahuma yavo.
Kusukurudzwa pfunga mumasangano. Pahuma dzedu pane njere dzedu. Kereke inotonga vanhu nehungwaru yovaendesa kure neMagwaro mumazano nezvido zvevanhu. MaKristu akuona zvaanodzidziswa nemakereke avo sezvakakosha kudarika zvinotaurwa neBhaibheri. Tinovimba nekereke dzedu kukunda kuvimba kwatinoita neBhaibheri.
Kana kereke ikangotanga kutonga mafungiro edu, inobva yatongawo maitiro edu, zvinomiririrwa neruvoko rwerudyi.
Zvino tiri vekereke, kwete vaKristu.
65-0829 EDENI RASATANI.
Zvino, chakaunza Edeni guru iri ravanorarama mariri nhasi. Edeni remakereke. Vari kubatana pamwechete zvino pakanzuru huru yeMubatanidzwa, uye zviri kuenda kunounza makereke epasi rese pasi pemusoro kana mutungamiri mumwechete, pachagadzwa Satani, ndizvo chaizvo.
65-0801M MWARI WENGUVA INO YAKAIPA
Tarirai zano rake rekuvaka kereke yemasangano hombe, kanzuru yemakereke epasi rese, mazviona, sangano guru, kuitira kuti nyika yese igomunamata, chikara, pasi pezita rekuti chiKristu chakabatana. Munoda kuzviverenga muBhaibheri here? Zvakazarurwa 13:6 na 8. Ndiro Baberi ranhasi.
Hamurangariri here kuti Nimrodi, munyengeri, akavaka rusvingo rwake rukuru akaita kuti mamwe maguta maduku ose arirumbidze? Babironi neBaberi chingori chinhu chimwechete. Rakangoshandura zita raro, uye, sekusimuka kwarakaika. Ndiro, Roma zvino rava Babironi. Pasi rese rinouya kuBabironi, riri kuunzwa nekanzuru yemakereke yepasi rese ichaita kuti munhu wese aipfugamire. Munenge matora chiratidzo chechikara, musingazivi zvamanga muchiita. Nekuti ....
Asi vaya vakasarudzwa vachanzwa Shoko raMwari vakabuda maari.
ZVAKAZARURWA 13:17 Kuti munhu arege kuva’po unogona kutenga nokutengesa, asi iye unechiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho.
Kereke ichakunda kutonga pasi rese.
ZVAKAZARURWA 13:18 Ndipo panokuchenjera, unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara; nokuti chiverengo ndechomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu namakumi matanhatu nenhanhatu.
Makore akapoteredza 750 AD kune gwaro rakaitwa zvechitsotsi raidaidzwa kuti The Donation of Constantine. Gwaro iri raitaura kuti Constantine akavimbisa kupa Pope nzvimbo dzese dziri muItaly uye kumadokero. Gwaro iri rakaponesa Pope kubva pakukurirwa nemarudzi evatorwa vechiRombadhi vakapamba Italy muna 751 AD. Vakatora nzvimbo dzenyika yeItaly dzine ruvara rweyero.
Pope akakumbira Pepini mutungamiri wemaFrank muFrance kuti adzingire maRombadhi kure, Pepini akaita saizvozvo. Pope akamuudza kuti Petro mutsvene ndiye ega aive nemakiyi eDenga uye kuti makiyi iwayo aizopihwa Pope chete nekuti ndiye aive mutevedzeri waPetro. Izvi zvakashanda zvakanaka kunevemarudzi evatorwa. Vaive vatenderana. Kana rudzi rwevatorwa rukachengetedza Pope muRoma, Petro aizozarura mukova weDenga kumunhu iyeye.
Dzidziso iyi yakawanisa Pope rukudzo rukuru pakati pemapegani. Yaive iri dzidziso isina anoikunda. Pope ega ndiye aive nemakiyi eDenga, zvichibva pambiri yemunhu mumwe, Petro. Petro ega ndiye akapihwa keyi yeDenga. (Jesu ndiye Mukova weDenga asi Petro ndiye akuonekwa zvino seakakosha nekuti ane kiyi yeMukova saka anogona kusarudza kuti anoda here kuzarura Mukova kana kuti kwete). Saka Pope akabva ava nesimba zhinji. Kana waive munhu aibatsira kuna Pope, Petro aizova shamwari yako.
Gwaro rakaitwa zvechitsotsi iri raive nemutsara mumwechete wainakidza kwazvo.
“Sezvo Petro akaropafadzwa akaiswa zviri pamutemo panzvimbo yeMwanakomana waMari panyika, saka zvinoonekwawo kuti Pontif, mugari wenzvimbo yake panyika, anobatira isu nehushe hwedu simba repamusoro-soro panyika”.
Pope ndiye ari pachinzvimbo chaPetro. Pope achiri kutaura izvi nahasi.
Petro, munhu, anodaidzwa kuti “Pachinzvimbo cheMwanakomana waMwari”. muchiLatin : VICARIVS FILII DEI.
Mamwe mavara ekuRoma aimiririra manhamba.
I = 1 V = 5 L = 50 C = 100 D = 5 00
Manhamba aya ese akasanganiswa anoburitsa 666.
(MaRoma aishandisa vara V pachinzvimbo cha U sezvo V ari nyore kunyora semitsetse yakatwasuka pamatombo.
saka vana U vaviri kana kuti UU vaizova VV nekuti VV ndipo patinowana W ichiri kudaidzwa kuti “double U”.)
Munhu mumwechete, Petro, ndiye akadaidzwa kuti VICARIVS FILLI DEI.
Asi Pope akashandisa mbiri yemunhu iyeye kuti aite simba pamusoro pekereke nekuti vanozviti ndivo vakatsiva nzvimbo yaPetro.
Kupinda kwenyu kuDenga kunobva pana Petro kwete Jesu, sezvo Petro ari ndiye anosarudza kuti “hongu kana kuti kwete” pakuzarura Mukova. Ndiko kuipa kwazvakaitiswa kunopfuura kuipa kungavapo.
Petro haangapomerwe nekuti haana kubvira azvidaidza chero zita rakadaro.
Petro akazarura Mukova weDenga nekiyi yaakapihwa.
MABASA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nemumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
39 Nokuti chipikirwa ndechenyu , navana venyu navose vari kure, vanozodanwa naShe, Mwari wedu.
Chikara chechipiri, America yevakabuda muchiCatholic, ichashanda pamwechete nechikara chekutanga, kereke yeRoman Catholic, yomanikidza nyika kuti iremekedze chikara chekutanga. America yakasimuka pakutungamirira pasi rese kuti chiprofita ichi chizadzizwe.
13 ndicho chiverengo chine chirevo chikuru kana takatarisana neAmerica.
America yakatanga nenyika 13 pavakawana kuzvitonga kuzere.
Vane mitsetse mitsvuku nemichena 13 pamureza wavo.
Chiverengo 13 chakanyorwa nehunyanzvi muchisimbiso chenyika yeAmerica:
Motto iri pachisimbiso cheAmerica ndeyekuti “E Pluribus Unum”. “Kubva muvazhinji tiri mumwe”. Pakashandiswa mabhii 13.
Pamusoro pane gore rinopoteredza nzvimbo yeruvara rwebhuru rwekukudzwa. Munzvimbo iyi mune nyeredzi 13.
Gondo riri pachisimbiso cheAmerica rakabata davi remuOrivi rine mashizha 13 semucherechezo werunyararo.
Panewo michero yemaorivhi 13 padavi iroro.
Kumhara pamwedzi yaive nhanho yezvesainzi yaive nerunyararo kwazvo musenturi yakadarika. Vanoenda kumwedzi vatatu vaive muroketi rimwechete reApollo. Maroketi akaongororwa ekuenda kumwedzi aive eApollo 7 , 8, 9 , ne 10. Maroketi mana aive nevanhu vatatu mune rimwe nerimwe aiburitsa vanhu gumi nevaviri. Saka Neil Armstrong aive munhu wechigumi netatu aive pakati pemujahwo wekuenda kumwedzi paakatsika pamwedzi muna 1969. Kumhara kumwedzi uku kwakapa Amerika mbiri huru mumezvesainzi. Negore 2017, makore 48 akazotevera, hakuna imwe nyika yati yatsikisa munhu wayo kumwedzi.
Gondo riri pachisimbiso cheAmerica rakabatawo miseve 13 sechiratidzo chehondo.
Chinhu chakakosha paatomi renyukiriya chakatangwa nekuwanikwa kwakaitwa nyuturoni mutsvagurudzo muna 1932. mujahwo wakaitwa kuti vapatsanure atomi reureniyamu. Bhomba reatomi, chombo chikuru chehondo, rakazoputitswa neAmerica makore 13 akazotevera muna 1945. Izvi zvakaita kuti sainzi dzeAmerica dzive nembiri uye dzityiwe.